အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): သာတူညီမျှ
မိုးအေးအေး နှင့် အိမ်မှာ တစ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ကော်ဖီဖျော် ဇာတ်လမ်းလေးကြည့် နဲ့ ဇိမ်ကျနေမိတယ် ။ မိန်းမ က ဒီနေ့ သူ့ ညီမ ၀မ်းကွဲ အိမ် ကိစ္စ ရှိလို့ ထွက်သွားတာ နဲ့ ကျွန်နော် လည်း ကော်ဖီ တစ်ခွက် ဖျော်ပီး မိန်းမ မရှိတုန်း ဧည့်ခန်းမှာ အောကားထိုင်ကြည့်ရင်း ဇိမ်ယူနေလိုက်တယ် ။အပြင်မှာ မိုးကလည်း သည်းသည်းမဲမဲ ကိုချနေတယ် ။
``ဒေါက် ..ဒေါက်…ဒေါက် ´´
အိမ်ရှေ့တခါး ခေါက်သံကြောင့် ကျွန်နော် လန့်သွားတယ် ။ ပုဆိုးစ ဖြေပီး လီးကိုင်ကာ အောကားကြည့်နေတော့ စိတ်တွေ လွင့်နေတဲ့ အချိန် တခါး ခေါက်သံ ကြားလိုက်ရတာကိုး။
ပုဆိုးသေချာပြင်ဝတ်လိုက်ပီး တီဗီ ကို ရီမုတ်ဖြင့်လှမ်းပိတ်ကာ တံခါးရှိရာ လာခဲ့လိုက်တယ် ။ မိန်းမ များ ပြန်လာတာလားမသိ သွားခါနီးတုန်းကတော့ မှာသွားတာ အပြန်နောက်ကျမှာမို့ နေ့လည်စာ ပါ ချက်ပေးသွားတယ် ပြောသွားတာပဲ ။ ကျွန်နော် စိတ်ထဲ တွေး ရင်းတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်
``ဟင်..မေသီ ပါလား မိုးတွေလည်း ရွဲစိုလို့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရောက်လာတာလဲ´´
``အမလေး မိုးအေးအေး နဲ့ နင်တို့လင်မယား တော်တော် ဇိမ်ကျနေတယ် ထင်တယ် တံခါးခေါက်သံတောင်မကြားကြဘူး ဒီမှာ ချမ်းလို့ သေတော့မယ်´´
မေသီက ကျွန်နော့် သူငယ်ချင်း မင်းညီ ရဲ့ မိန်းမ ကျွန်နော် နဲ့ မေသီကလည်း ကျောင်းကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေပဲ ကျွန်နော် တို့ သုံးယောက်က အလယ်တန်းကနေ တက္ကသိုလ် ထိ အတူတူ တက်ခဲ့ကြတာ ။ မင်းညီ နဲ့ မေသီ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က လက်ထပ်သွားကြတာ ကျွန်နော် နဲ့ ကျွန်နော့်မိန်းမ ဝေေ၀ တို့ လက်ထပ်တာနဲ့ မတိမ်းမနှောင်းပဲ ။ မေသီ က သွက်တယ် ကျောင်းတုန်းက ကျွန်နော် သူ့ကို ပိုးပန်းဘို့ ကြံသေးတယ် ဟိုကောင် မင်းညီ က ဦးသွားတာ နဲ့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း မို့ လက်လျော့လိုက်ရတယ် ။ မင်းညီ နဲ့ ကျွန်နော် နဲ့ ကလည်း အရမ်းခင်တာ ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် တက္ကသိုလ် မှာ တုန်းက ဖွန်ကြောင် အတူတူ ကေတီဗီသွားအတူတူ မာဆက်သွား အတူတူ နောက်ဆုံး ဖာတောင် အတူတူ သွားချ ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဗျ ။ ဒါပေမယ် ဒီကောင်ကြီးက မေသီ ကို ကြွေနေတယ် ဆိုတာ နဲ့ ကျွန်နော် လည်း နောက်ဆုတ်ခဲ့ရတာ ။ မေသီက လည်း ကြွေလည်း ကြွေချင်စရာလေ အသားကဖြူဖြူ မွန်စပ်တယ် ။ မွန်ဗမာ ကပြား
တင်လုံးကြီးကြီး အရပ်က ယောင်္ကျားလေး တွေ မှီတယ် ငါးပေသုံး ကျော်လောက်မယ် ။ ကျောင်းပီးတော့ သူတို့ နှစ်ယောက် လက်ထပ်သွားပီး မကြာဘူး ကျွန်တော် လည်း အမေ့သူသယ်ချင်း ရဲ့ သမီး ဝေေ၀စိုး နဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တာ ။
``ဟဲ့ မိုးဝေ ဘာကြည့်နေတာလဲ မမြင်ဖူးတဲ့ အတိုင်းပဲ ဝေေ၀ က ဘယ်သွားလို့တုန်း သူပဲ ငါ့ကို အိမ်လာခဲ့ပါ ချိန်းထားပီး မေ့သွားတာလားမသိဘူး ´´
``သူ့ ညီမ ၀မ်းကွဲ အိမ် အရေးကြီးလို့ ဆိုပီး ထွက်သွားတာပဲ ´´
`` အော် ငါ အရမ်းချမ်းနေပီ နင့်မိန်းမ အကျီတစ်စုံလောက် ထုတ်ပေးဦး အ၀တ်တွေ လဲ ချင်နေပီ ´´
``အေးး အေးးး လာလာ ´´
ကျွန်နော် အိမ်တံခါး ကို ပြန်ပိတ်ပီး မေသီ ကို ကျွန်နော်တို့ အခန်းထဲ ခေါ်လာလိုက်တယ်
``ရော့ တဘက် သုတ်လိုက်ဦး ´´
ကျွန်နော်တို့ လင်မယား နှစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ရေစိုဝတ်တွေ နဲ့ မေသီလိုက်လာတယ် အရမ်းလည်း ချမ်းနေပုံရတယ် ။ ကျွန်တော် တဘက် ထုတ်ပေးတော့ ခေါင်းတွေ လက်တွေ သုတ်ရင်း နုတ်ခမ်းတွေ က လည်း တစပ်စပ် တုန်နေတယ် တကိုယ်လုံး မိုးရေတွေ ရွဲစိုနေတော့ ထမိန်တွေကလည်း ပေါင်သားတွေ ကို ကပ်နေပီး အမြှောင်းလိုက် ပေါ်ထွက်နေတယ် ။ ဘိုက်သားတွေက ကျောင်းတုန်းကလောက် ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် သိပ်မရှိတော့ပေမည့် ကြည့်ရရုပ်မဆိုးသေး ။ ဘီဒိုထဲမှာ မိန်းမ ရဲ့ ဂါဝန်တစ်ထည် ထုတ်ပေးလိုက်ပီး အခန်းထဲက ထွက်ခဲ့လိုက်တယ် ။ မျက်စိထဲမှာတော့ တင်ကားကားပေါ်မှာ ထမိန်က ကပ်လျှက် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မေသီ့ ပေါင်တံကြီးတွေ ကို မြင်ယောင်နေမိတယ် ။ ခုန က အောကားကြည့်ထားတဲ့ အရှိန်ကလည်း မသေသေး ဘူးလေ ။ ဧည့်ခန်းမှာ ပြန်ထိုင်မယ်လုပ်တုန်း အခန်းထဲက မေသီ့ ရဲ့ တုန်တုန်ချိချိ ခေါ်သံ ကြားလို့ အခန်းထဲ ပြန်ပြေးဝင်လာလိုက်တယ် မေသီတစ်ယောက်ကျွန်နော့် တို့ လင်မယားကုတင်ကြီးပေါ်မှာ စောင် ခေါင်းမှီးခြုံထားရင်း တုန်နေတယ် ။ မိန်းတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ မီးယပ်ချမ်း ဖြစ်ပီထင်တယ်
``မေသီ …မေသီ ရရဲ့လား ´´
``ဟီးးးးဟီးးးး ချမ်းတယ် …ဟီးးးး စောင်ထပ်ခြုံပေးဦးးးး´´
ဘီဒိုထဲက ဂွမ်းစောင်တစ်ထည် ထပ်ယူလိုကပီး မေသီ့ ပေါ် ခြုံပေးလိုက်တယ် ။ တုန်နေတာ မပျောက်သေး
``ဟီးးးးးဟီးးးး ချမ်းတယ် မိုးဝေ ငါ့ပေါ် တက်ဖိပေးထားပါလားး ဟီးးးအီးးးး´´
ဟင် …ဒုက္ခပဲ … မေသီကလည်း အရမ်းချမ်းနေတယ် ပီးတော့ လည်း ကြည့်ဦးလေ ကုတင်ပေါ်မှာ ပုဆစ်တုတ်ကွေးထားပီး စောင်ကို ခေါင်းမှီးခြုံထားတာ ဒူးတုတ်ပီး ဖင်ကုန်းကာ ကွေးနေတဲ့ပုံမျိုး ကျွန်တော် ဘယ်လို တက်ဖိရမလဲ ။ မိန်းမတွေ မီးယပ်ချမ်းက ကျွန်နော် တို့ ငှက်ဖျား ထသလိုပဲ စောင်ဘယ်လောက်ခြုံခြုံ မရဘူး အပေါ် က လူတက်ဖိ ပီး အနွေးဓါတ် ပေးမှ ပိုအဆင်ပြေတယ် ။ ပီးတော့လည်း ကြည့်ဦး ကုတင်ဘေးမှာက ခုနက သူဝတ်လာတဲ့ အ၀တ်တွေ အကုန်ချွတ်ပီး ခြေရင်းမှာ ချထားတယ် ကျွန်နော် ပေးခဲ့တဲ့ ဂါဝန်ကလည်း ကုတင်ဘောင်ပေါ်မှာ ခေါက်လျှက်သားပဲရှိသေးတယ် ။ဧကန္တ သူ အကျီချွတ် တဘက်သုတ်ရင်း မီးယပ်ချမ်းထလာလို့ ဂါဝန် အကျီ တောင် မ၀တ်နိုင်သေးဘဲ စောင်ခြုံပီး တက်ကွေးတာ ဖြစ်မယ် ။ `မိုးဝေ …လုပ်လေဟာ ..ဟီးးးးဟီးးး ချမ်းလွန်းလို့ သေတော့မယ် ´´
မထူးတော့ မှောက်လျှက်ပုဇွန်ထုပ်ကွေး ကွေးနေတဲ့ မေသီ အပေါ် ကျွန်နော် တက်ခွပီး မှောက်လိုက်တယ် စောင်နှစ်ထပ် ခြုံထားတာ မို့ မသိသာပေမယ့် မေသီ့ ဖင်တုံးပေါ်တည့်တည့်မှာ ကျွန်နော့် ပေါင်ဂွကြား နဲ့ ခွထားတော့ ဆုံမှတ်နှစ်ခုကြားမှာ စောင်နှစ်ထည် သာခြားနားနေတော့တယ် ။ အောက်က မေသီ က တုန်နေတော့ ပိုဆိုးလာတယ် တင်ပါးတွေက တုန်တုန်နေပီး ကျွန်နော့် လီးကို ပွတ်နေသလို ဖြစ်နေတော့ အရှိန်မပြေသေးတဲ့ ကျွန်နော့် လီးကလည်း တအား တောင်လာတယ် ။ ဖင်ကုန်းပီး တုန်နေတဲ့ မေသီ့ အပေါ် တက်ခွ ဖိထားမှ တော့ မတောင်ပဲ ဘယ်နေတော့မလဲဗျာ ။ ဆယ်မိနစ် သာသာ လောက် နေတော့ မေသီ ငြိမ်သွားတယ် အချမ်းပြေသွားပီထင်တယ် . ညည်းသံလည်း ပျောက်သွားတယ် ။
``မေသီ ရရဲ့လား သက်သာလား ´´
``အင်းးး သက်သာပါတယ်နဲနဲတော့ ချမ်းနေတုန်းပဲ´´
စောင်အောက်မှ မေသီ ပြန်ပြောတယ်
သူ့ တင်ပါးကြားမှာ ကျွန်နော့်လီးတံ ဖိမိနေတာ စောင်ခံနေတော့ မသိဘူးထင်ပါတယ် ခန နေတော့ မေသီ ခေါင်းမှီးခြုံထားတဲ့ စောင်ကို လှမ်လိုက်တယ် ကျွန်နော့် မျက်နှာ နဲ့ သူ့မျက်နှာ ကပ်လျှက် လို ဖြစ်သွားတယ် ။
``ညောင်းလာပီ ခနဖယ်ဦး ´´ဆိုတော့ ကျွန်နော် သူပေါ်က ဆင်းပီး ဘေးမှာ လှဲလိုက်တယ် ပုဆစ် တုတ် ကွေးပီး ကုန်းထားရာက နေ ကျွန်နော့် ဘက်ကို ကိုယ်လုံးလေး လည်ပီး လှဲလိုက်တယ် ။ ခြေထောက်တွေကို ပြန်ဆန့်ပီး အပေါ်က ဂွမ်းစောင်တစ်ထပ်ကို ဖယ်လိုက်တယ် ။ အောက်က စောင်က အပါး ။ကျွန်နော် နဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်လို ဖြစ်သွားတော့ ကျွန်နော် နဲ့ မျက်လုံးချင်း ဆုံသွားတယ် ။ ကျွန်နော် လက်က မေသီ့ ကိုယ်လုံးလေး ကို အသာဖက်ထားတုန်း ရှိသေးတယ် ။ စောင်ပါးပါးလေး သာခြုံထားတဲ့ မေသီ့ ကိုယ်လုံးက ကျွန်နော့် ရင်ခွင်ထဲ ရောက်လု နီးပါး ။ ကျွန်နော် ကိုယ်လုံးကို သူ့ ဘက်ကို နဲနဲ ထပ်ရွေ့လိုက်တော့ ကျွန်နော့် ရဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီ မ၀တ်ထားတဲ့ လီးကြီးက ပုဆိုးနဲ့ စောင်ပါး လေး ခံနေတဲ့ ကြားက မေသီ့ ပေါင်ကို သွားထောက်မိသွားတယ် ။ မေသီ မျက်လုံး ပြူးသွားတယ် ။ပီးတော့မှ သူလည်းသတိရသွားတယ် ထင်တယ် စောင်အောက်မှာ လည်း မေသီ ဘာမှ မ၀တ်ထားဘူး ။
``ဟဲ့..မိုးဝေ ..အောက်က နင့်…ဟိုဟာ….´´
မေသီ့ ကိုယ်လုံးလေး နောက်ကို နဲနဲ ဆုတ်သွားတယ် ။ ကျွန်နော် လည်း မထူးတော့ မေသီ့ ကိုယ်လုံး ကို ကျွန်နော်လက်နဲ့ ထပ်ဆွဲပီး ခပ်ကြပ်ကြပ်ဖတ်လိုက်တယ်။
``ဟဲ့ မိုးဝေ ငါ…ငါ ရပီ ဖယ်တော့လေ ..သက်သာပီ´´
``နင်သက်သာ သွားပေမယ့် ငါမသက်သာတော့ဘူး မေသီ´´
ကျွန်တော် ပြောလည်းပြော လက်ကလည်း မေသီ့ တင်ပါး ကို လှမ်းကိုင်လိုက်ပီး ကျွန်တော့ဘက်ကို ဆွဲလိုက်တော့ ကျွန်နော့်လီးက မေသီ့ ပေါင်ကြား ကို ပိုထောက်သလို ဖြစ်သွားတယ် ။
``ဟဲ့ မိုးဝေ ငါနင့်သူငယ်ချင်း မိန်းမ နော် သတိလေးဘာလေ ထားဦး နင့်မိန်းမ နဲ့ မှားနေတာလား ´´
``မမှားပါဘူး မင်းညီ က နင့် ကို ငါ့နောက်မှ ကြိုက်တာပါဟာ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းမို့ ငါလျော့ပေးလိုက်တာ နင့်ကို ငါက အရင် ကြိုက်ခဲ့တာ ´´
``ဟင် မဟုတ်တာတွေ လျောက်မပြောနဲ့ဟာ ဖယ်တော့ ဝေေ၀ ပြန်လာရင် ဒုက္ခ တွေ့လိမ့်မယ်´´
ကျွန်နော် မေသီ ကို စကား ထပ်အပြောမခံတော့ သူ့ နုတ်ခမ်း ပါးပါးလေး ကို စုပ်ခဲလိုက်တယ်
``ပြွတ် ပြွတ် ´´
``အု.. အင်…ပြွတ် ပြွတ် ´´
ကျွန်နော့်လက်ကလည်း စောင်အောက်ကိုေ၇ာက်သွားပီး မေသီ့ တင်ပါး ပေါ်ကို ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ် ။ မေသီ က အတင်းရုန်းတယ် မရ ၊ ကျွန်နော် အလွတ်မပေး ။ နုတ်ခမ်း ကို အတင်း ဆွဲစုပ်ထားပီး ကျွန်နော့်လက်တွေက တင်ပါးပေါ်မှ တဆင့် မေသီ့ ရဲ့ ပိပိ လေး ရှိရာ ကို လှမ်းကိုင်လိုက်တယ် ။ ပေါင်နှစ်လုံး ကို အတင်းညှပ်စေ့ ထားတာကြောင့် ပိပိ လေး ရှိရာ ကို မနဲ လက်ထိုးသွင်းရတယ် ။ တင်ပါး နောက်က နေလှမ်း နှိုက် ရတာ မို့ ခက်ခက်ခဲခဲ လက်ကို ရောက်အောင် သွင်းရတယ် ။ တွေ့ပါပီ မေသီ့ အဖုတ်လေး …ကျွန်နော့် လက်ခလယ်ကို အဖုတ် အကွဲကြောင်းထဲကို ထိုးထဲ့လိုက်တယ် ။ လက်တစ်ဆစ်လောက်ပဲ ၀င်တယ် ကျွန်နော် ၀င်သွားတဲ့ တစ်တဆစ် သာသာ လောက်ကို ကွေးဆန့် လုပ်ရင်း အဖုတ်ကို ကလိပေးနေလိုက်ရင်း နုတ်ခမ်းကလည်း ကစ်ဆင် ကို မပြတ်ဆွဲပေးနေလိုက်တယ်
စထည့်ထည့်ချင်းတော့ လက်ခလယ်က ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ ရှိလှပေမယ့် ငါးမိနစ်လောက် ကြာတော့ အဖုတ်ထဲ မှာ အကြည်ရွဲရွဲလေးတွေ ဖြင့်ချောချောချူချူ ဖြစ်လာတယ် ။အစကလောက်လည်း မေသီ မရုန်းတော့ ။ နမ်းနေတဲ့နုတ်ခမ်း ကို မေသီ က အတင်းခွာပီး
``မိုးဝေ နင်အရမ်း ဆိုးတာပဲ အသက်ရှူတောင်ကြပ်လာပီ နဲနဲ လျော့ဦး တကတည်း မိန်းမမရှိတဲ့သ စက်ပတ် မကိုင်ဖူးတဲ့သူကျနေတာပဲ တကယ်တည်း´´
``ငါမနေနိုင်တော့လို့ပါ ဟာ ..စိတ်တွေ ထိန်းမရတော့ဘူး ´´
``ရအောင် ထိန်း ´´
``မရတော့ဘူး ခုနက နင် မိုးရေတွေစိုပီး တင်ပါးတွေ မှာ ထမိန်လေး ကပ်နေတာရယ် နင့်တင်ပါးပေါ် တက်ခွဖိထားတာရယ် ဘယ်လို ထိန်းလို့ရတော့မလဲ ငါ့ကို ခွင့်ပြုလိုက်တော့နော် သူငယ်ချင်း´´
``ဘာသူငယ်ချင်းလဲ …ရစရာမရှိအောင် ကိုင်တွယ်နေပီးတော့များ သူငယ်ချင်း ပြောနေသေးတယ် နင့်မိန်းမ သိမှာ မကြောက်ဘူးလား ´´
``ငါ့မိန်းမ က ညနေမှ ပြန်လာမှာ အေးအေးဆေးဆေးပဲ သူမသိပါဘူး´´
ပြောလည်းပြော ကျွန်နော့်လက်ကလဲ အဖုတ်ထဲ နှိုက်ကလိ နေတာ ကို ဆက်တိုက်လုပ်ပေးနေတယ် ။
``တော်တော် ဆိုးတဲ့ကောင် ပြောလို့ကို မရဘူး´´
မေသီက အပျိုလေးတစ်ယောက်အလား ကျွန်နော့် ကို မျက်စောင်းတစ်ချက်လှမ်းပစ်လိုက်တယ်။မေသီ့ ပါးလေးကို တစ်ချက်လှမ်းနမ်းလိုက်ရင်း ကျွန်နော့် လက်က မေသီ ကိုယ်ပေါ်မှ စောင်ပါးလေးကို ခွာချလိုက်တယ် ။ ရှက်သွားသည့် အမူအရာ ဖြင့် မေသီ ကျွန်နော့် ကိုယ်ထဲ ကို တိုးဝင်လာတယ် ။ ပုဆိုး ခါးပုံစ ပြေနေပီ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်နော့် ပုဆိုးကို ခြေထောက်ဖြင့် ဆွဲ ကာ အောက်ကို လုံးထွေး ချွတ်လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် လီးက လဲ တအား တောင်နေပီ ။ မေသီက ကျွန်နော့် လီး ကို မသိမသာ လှမ်းကြည့်တယ် ။ ကျွန်နော့် လက်ကို အဖုတ်ထဲက နေ ပြန်ရုတ်လိုက်ပီး မေသီ့ ကို ပက်လက်လှန် အနေအထား ဖြစ်အောက် တွန်းလိုက်တယ် ကျွန်နော်လည်း မေသီ့ ပေါ် တက်ခွလိုက်တယ် ။ မေသီက မျက်လုံးလေး မှိတ်ထားပီး သူ့လက်နှစ်ဘက်က နို့သီး နှစ်ဘက် ပေါ် ကို ဖုံးအုပ်ထားတယ် ။ ကြည့်စမ်း …မေသီ့ အဖုတ်မှာ အမွှေးမရှိ ပြောင်နေအောင် ရိတ်ထားတာပဲ ။ ကျွန်နော့် မိန်းမ ဝေေ၀ ကတော့ အမွှေး မရိတ်တတ် ရိတ်သည့် အကျင့်လည်းမရှိ ။ အခုလို အဖုတ် အမွှေး မရှိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်လိုက်ရတော့ ကျွန်နော့် ရမ္မက်စိတ်တွေ ပိုကြွသွားသလိုပဲ ။ လူဆိုတာလဲ ခက်သား အဖုတ်မွှေး ထူတာ ခနခန မြင်နေရရင် အမွှေးမရှိတဲ အဖုတ်ကို စိတ်ထတယ် ။ အဖုတ် မွှေး မရှိတာ ခနခန လိုးနေရရင်လည်း အဖုတ်ထူထူ မိန်းမ ကို လိုးချင်ကြပြန်ရောလေ ။။ စိတ်ဆိုတာ မြင်နေကျ မဟုတ်တာ ကို ပို တမ်းတ တတ်တာပဲလေ ။ ကျွန်နော်က လမွှေး ကို ခနခန ရိတ်တယ် မိန်းမက မရိတ် ။ ဟောအခုတော့ အမွှေး ရိတ်ထားတဲ့ အဖုတ်နဲ့လီး တွေ့ကြပီလေ။ ကျွန်နော့်လီးတံကို မေသီ့ အဖုတ်ပေါ် အလျားလိုက် တင်ထားရင်း မေသီ့ လက်နှစ်ဘက်ကို ရင်ဘက် ပေါ် က နေဆွဲ ခွာလိုက်တယ် ။
ပီးတော့ မေသီး နို့တွေကို ကုန်းစို့ရင်း အဖုတ်ပေါ်လီးအချောင်းလိုက် အကွဲကြောင်းတစ်လျောက် ပွတ်ဆွဲလိုက်တယ်
``ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´
``အားးး မိုးဝေ …အားးးး´´
မေသီ့လက်တွေက ကျွန်နော့် ကျောကုန်းကို လာဖက်လာပီး ပေါင်တံတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း ကားသွားတယ် ။
``အားးးမိုးဝေ..အားးး ငါလည်း စိတ်တွေ ပါလာပီဟာ ..ဘယ်လိုမှန်းမသိတော့ဘူး အားးး``
မေသီ ထံမှ ညည်းသံ တွေ ထွက်လာပီး အောက်ကနေ အဖုတ်ကို ပြန်ကော့တင်ကာ ပြန်ပွတ်လာတယ် ။
``အားးး မိုးဝေ မခံစားနိုင်တော့ဘူး နင့်လီးသွင်းလိုက်တော့ ငါ့အဖုတ်ထဲ တအားယားလာပီ အားးး´´
``အင်းးး မေသီ နင့်ကို ငါလိုးတော့မယ်နော် သွင်းလိုက်တော့မယ်နော် ´´
``အင်းးး လိုးတော့ မိုးဝေရာ ငါတအား ယားနေပီ … ထည့်လိုက်တော့ ´´
မေသီ ပေါင်ကို သေချာကားပစ်လိုက်ကာ ဒူးနှစ်ဘက်ကို ထောင်လိုက်ရင်း ကျွန်နော့်လီး ကိုလှမ်းကိုင်ရင်း အဖုတ်ဝမှာ တေ့လိုက်တော့တယ် ။ ကျွန်နော်လည်း ကိုယ်ကို ပြန်မတ်လိုက်ကာ မေသီ့ ခါးကို ကိုင်းရင်း အချိန် မဆိုင်းတော့ပဲ မေသီ့ အဖုတ်ထဲကိုလီး ထိုးသွင်းပစ်လိုက်တယ်
``ဘွတ် …ပလွတ် ..´´
``ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
``ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် ´´
``ဖုတ် ဖုတ် ဖုတ် ´´
``အားးးးကောင်းတယ် မိုးဝေ စောင့်ပေး အားးးး´´
မေသီကလည်း ကျွန်နော့် တင်ပါးတွေ ကိုလှမ်းကိုင်ကာ အောက်မှ စောက်ဖုတ်ကို ကော့ကော့ပေးနေတယ် ကျွန်နော်ကလည်း မေသီ့ ခါးကို ကိုင်ကာ အားရှိပါးရှိ စောင့်စောင့်လိုးနေတယ်
``ဖောင်း ဖောင်းဖောင်း ´´
``ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ´´
``အားးးးကောင်းတယ် မိုးဝေ စောင့်ပေး အားးးရှီးးးးးးးးးး´´
ကျွန်နော်လည်း အောက်က အော်ညည်းနေတဲ့ အသံကြောင့် စိတ်တွေ ပိုကြွကာ စောင့်စောင့်ပီး လိုးပေးနေမိတယ် ။ ဆယ်မိနစ်လောက် ဆက်တိုက်လိုးပီးတော့ ညောင်းလာတာမို့
``မေသီ ဖင်ကုန်းပေးပါလား နောက်ကနေ စောင့်လိုးချင်လို့``
ကျွန်နော့် လီးကို ခန ချွတ်လိုက်ပီး နောက်ကို နဲနဲ ဆုတ်လိုက်တယ် မေသီလည်း ကုန်းထလာပီး လေးဘက်ထောက်ဖင်ကုန်းလိုက်တယ် ။ ဖင်ကုန်းလိုက်မှ မေသီဖင် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး လုံးခဲခဲ ကြီး ကို သေချာ မြင်ရတော့တယ် ။ ကားလိုက်တဲ့ တင်ပါး ကျွန်နော့် မိန်းမ ဖင်ထက်တောင် ထွားမယ် ထင်တယ် ။ ဒူးနှစ်ချောင်း ကို ခပ်ကားကား ထားပီး လေးဘက်ထောက်ထားတာမို့ မေသီ့ စောက်ဖုတ်အာအာ ကြီး က နောက်ကိုပြုထွက်နေတယ် ။ စောက်ဖုတ်တင်မက အသားဖြူဖြူ တင်နှစ်ခြမ်းကြားမှ စအိုဝ ညိုတိုတိုလေးရဲ့ ခရေပွင့် လေး ကို ပါ သေချာ မြင်လိုက်ရတယ် ။စောက်ဖုတ်နုတ်ခမ်းသားတွေက ဘေးကို အာထွက်နေပီး အရည်ကြည်တွေဖြင့် စိုရွဲနေတယ်။ စောက်ဖုတ်အာအာ ကြီးထဲမှ အတွင်းသား နီရဲရဲလေး ပါလှမ်းမြင်နေလိုက်ရတော့ မနေနိုင်တော့ပဲ ကျွန်နော် နောက်ကနေ ကုန်းယက်ပစ်လိုက်တယ် ။
``အားးးမိုးဝေ မလုပ်…မလုပ်နဲ့ အားးး´´
စောက်ဖုတ် ဘေးနုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်ကို လှမ်းစွဲစုပ်ရင်း လျှာ ကို အပြားလိုက်ထုတ်လိုက်က စောက်ဖုတ်မှ နေ ဖင်ဝအထိ ယက်ပစ်လိုက်တယ်
``အားးးမိုးဝေရယ် ဘယ်လိုလုပ် အားးးး´´
မေသီ့ ဖင်ကြီး ပိုပိုကြွတက်လာပီး ညည်းသံတွေ လည်း အဆက်မပြတ်ညည်းနေတော့တယ်
``ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ``
``ပလက် ပလက် ပလက် ´´
``အားးးမိုးဝေ ငါပီးသွားလိမ့်မယ် လိုးပေးတော့ အားး ရှီးးးးးးးးး´´
ကျွန်နော်လည်း စောက်ဖုတ် ယက်နေရာမှ ရပ်လိုက်ပီး မေသီ့ တင်ပါး နောက်မှာ ကျကျ နန နေရာယူလိုက်ကာ အဖုတ်ဝ မှာ လီးဒစ်ကို တေ့လိုက်ပီး စောင့်သွင်းလိုက်တယ်
``ပလွတ် ..ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
``အ..အ.အားး လိုးး လိုးး မိုးဝေလိုးးးအားးးး´´
``အင်းး မေသီ နင့်ကို ငါလိုးနေပီ ကောင်းလားးး``
``အားးးကောင်းတယ် မိုးဝေ စောင့်လိုးတော့ ငါ့စောက်ဖုတ်ကို စောင့်လိုးတော့´´
မေသီ့ တင်ပါး နှစ်ဘက်ကို ကိုင်ညှစ်ကာ အားရပါးရစောင့်ထည့်လိုက်တယ်
```အားးး ကောင်းတယ် အားးးး´´
``ဖုတ် ဖုတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
``ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် ´´
အသံမျိုးစုံက အခန်းထဲမှာ ဆူညံထွက်နေတယ် ။ တစ်အိမ်လုံးမှာ မေသီ နဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ယောက်ထဲ အိမ်ရှေ့ တံခါးလည်း ပိတ်ထားတာ မို့ အားရပါးရအောင် စောင့်စောင့်လိုးနေမိတယ် ။အပြင်က မိုးကလဲ ပိုပို သည်းလာတော့ ကျွန်နော်တို့ အသံတွေ ကို အပြင်က နားထောင် ရင် ကြားရမည် မထင် ။
``ဖောက် ဖောက် ဖောက် ``
``အအ…အာားး ကောင်းတယ် မိုးဝေ ငါ ပီးးးးပီးတော့မယ် ´´
``တူတူ ပီးမယ် မေသီ ငါလည်းပီးတော့မယ် စောင့်လိုးပီနော်``
``အင်းးး စောင့် ပါ…အားးးလိုးးးးကောင်းတယ် ´´
``ဖောက် ဖောက် ဖောက် ´´
``အားးးမေသီ ငါ ပီးးးးးးပီး …အားးထွက်ကုန်ပီ``
``အင်းးးးးပီးလိုက် အားးး အ၇ည်တွေ ထည့်လိုက် အားးးး´´
ကျွန်နော့် လီးထိပ်က ကျဉ်တက်လာပီး သုတ်ရည်တွေကို မေသီ့ စောက်ဖုတ်ထဲ စောင့်စောင့်ပီး ပန်းထည့်ပစ်လိုက်တယ်
ကျွန်နော့် လီးကို မေသီ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို အဆုံးထိ ထိုးသွင်းရင်း သူ့တင်ပါးနဲ့ ကျွန်နော့် ဆီးခုံ ကို ကပ်ဆွဲရင်း အရည်တွေ အကုန်ပန်းထုတ်ကာ မေသီ ပေါ် မှောက်ချလိုက်တယ် ။ မေသီ လည်း လေးဘက်ထောက်ထားရာမှ ပြိုဆင်းကျသွားပီး သူကမှောက်လျှက် ကျွန်နော်က သူ့ ပေါ် မှောက်လျှက် ထပ်ကျသွားတယ် ။လီးတံက အဖုတ် ထဲ မှ တ၀က်ကျော်ကျော် လောက် ပြန်ထွက်လာပေမယ့် အဆုံးထိ ကျွတ်ထွက်မသွား ။ မေသီရော ကျွန်နော် ပါ ထပ်ပီး မှောက်လျှက်သားဖြင့် မျက်လုံးများမှေးစင်းလာပီး ခနတာ မှိန်းနေမိတယ်။နာရီဝက်လောက် မှိန်းနေပီးမှ မေသီ နဲ့ ကျွန်နော် အိပ်ယာပေါ်မှ ထ ကာ ရေချိုးခန်းဝင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ကြတယ် ။ သန်ရှင်းရေးလုပ်ပီးတော့ မေသီက ကျွန်နော် ထုတ်ပေးထားတဲ့ ကျွန်နော့်မိန်းမဝေေ၀ ရဲ့ ဂါဝန်လေးကို ၀တ်လိုက်တယ် ။ မေသီက ကျွန်နော့် မိန်းမ ထက် တင်တွေရင်တွေ ထွားတာ ကြောင့် ဂါဝန်က ကြပ်ပီး ပိုကြည့်လို့ကောင်းနေတယ် ။ပီးတော့ ကျွန်နော့် မိန်းမ ချက်ပေးသွားတဲ့ နေ့လည်စာ ကို မေသီ နဲ့ နှစ်ယောက် အတူတူ စာဖြစ်ကြတယ် ။ထမင်းစားပီးတော့ ဧည့်ခန်းဆက်တီ မှာ ထိုင်တော့ မေသီက ကျွန်နော့် ပေါင်ပေါ်မှာ လာထိုင်တယ် ။
``နင့်မိန်းမ ဘယ် အချိန် ပြန်လာမှာလဲ သူလာခါနီးရင်တော့ ပြန်မယ်လေ ´´
``သူ မလာလောက်သေးဘူး ညနေ ထမင်းစားပီးလောက်မှ ပြန်လာမယ် ပြောသွားတယ်´´
``အင်း ဒါဆို ပြန်သေးဘူးလေ ငါ့ယောင်္ကျားကလဲ ပဲခူးမှာ ကားအ၀ယ် လာလို့ သွားတယ် ညလောက် မှ ပြန်လာမယ် ထင်တယ် ´´
မင်းညီက ကျောင်းပီး ကတည်း က ကားပွဲ စားလုပ်နေတာ ။ ကျွန်နော် က ကုပ္မဏီဝန်ထမ်း ကျွန်နော့် မိန်းမ က စိန် ပွဲစားရွေပွဲစားလုပ်တယ် ။ မေသီက တော့ ဘာမှ မလုပ် အိမ်မှာပဲ အိမ်မှု ကိစ္စ လုပ်နေတာ ဆိုတော့ မေသီက အားနေတယ် ။ ကျွန်နော့်ပေါင်ပေါ် မှာ ထိုင်ရင်းမေသီ နဲ့ ကျွန်နော် စကားတွေ အများကြီး ပြောဖြစ်ကြတယ် ။ နောက်ဆုံး သိလိုက်ရတာ မေသီက ကျောင်းတုန်းကတည်းက ကျွန်နော့်ကို သူလည်း စိတ်ဝင်စားခဲ့သေးတယ် ဆိုတာပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် မင်းညီက ဖွင့်ပြောတော့ မင်းညီ နဲ့ ဖြစ်သွားတယ် တဲ့ ၊
``ငါက မေသီ ဒီနေ့ အိမ်မှာ ရှိမယ် ထင်လို့ လာခဲ့တာ မေသီ နဲ့ စကားမပြောရပဲ နင်နဲ့ ..´´
`` နင်နဲ့ ဘာဖြစ်လဲ …´´
``အလိုး ခံလိုက်ရတယ် ဟေးးးဟွန်း နင်တော်တော် ဆိုး´´
``ဟီးးး ငါလည်း နင်မလာခင်က တစ်ယောက်တည်း မိုးအေးအေး နဲ့ ပျင်းပီး အောကားထိုင်ကြည့်နေတာ နင်ရောက်လာတော့ စိတ်တွေ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်´´
အောကားကြည့်နေတာ သတိရပီး ကျွန်နော် တီဗီ ရီမုတ်ကို လှမ်းယူကာဖွင့်လိုက်တယ် ။ ဒီဗီဒီ ခွေ ထည့်ထားတာ ဆိုတော့ အခွေထဲမှာ က အပုဒ် ၂၀ လောက် ပါတာ မို့ မပီးသေး နောက်ဇာတ်လမ်း တွေ ထပ်လာနေတယ်
``ဟယ်…နင်တော်တော် ဆိုးတာပဲ မိန်းမ ရှိနေတာတောင် ဒါတွေ ခိုးကြည့်သေးတယ် နင့်မိန်းမ နင်ကြည့်ပေါ့ ´´
``အရသာမတူဘူး ဟ ..´´
``ပြန်ပိတ်လိုက်ဟာ ..စကားပဲ ပြောကြမယ် ´´
``ကြည့်ပါ ဟ နင်ကလဲ မိုက်တယ် ခုလို မိန်းကလေး နဲ့ အတူတူ တခါမှ မကြည့်ဖူးသေးဘူး ´´ကျွန်နော် တီဗီ ကို ပြန်မပိတ် မေသီ့ တင်ပါးတွေ ပေါင်တွေ နို့တွေ ကို ပွတ်ရင်း လည်ဂုတ်လေး ကို နမ်းလိုက်တယ် ။ တီဗီ မှာ နိုင်ငံခြားမင်းသားမင်းသမီးကလဲ လိုးဘို့ နူးနှပ်နေပီ ။ အင်္ဂလိပ်မ နဲ့ ငနဲ သား က ကိုယ်လုံးတီးတွေ နဲ့ အိပ်ယာပေါ် မှာ ကစ်ဆင်ဆွဲ နေပီ ။ ကျွန်နော် မေသီ့ ရဲ့ လည်ဂုတ်လေးတွေ ကို လျှာဖျားလေး နဲ့ ဖိပွတ်လိုက် ဆွဲစုပ်လိုက် လုပ်ပေးရင်း ပေါင်တွင်းသားတွေ နို့တွေ ကို လည်း ပွတ်ချေပေးနေမိတယ် ။ ဇာတ်ကားကြည့်လိုက် ပွတ်လိုက် နမ်းလိုက် လုပ်နေရတော့ ကျွန်နော့် လီးကလည်း ချက်ချင်း ထောင်မတ်လာတယ် ။ ဇာတ်ကားထဲ က ဆော်က ဘဲရဲ့ လီး ကို စပီး လွေပီ ။ လီးတံ က ကျွန်နော့်ထက် တော်တော်ကြီးမယ် ။ ဘဲကြီးက ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်နေပီး ဆော် က ကုတင်ပေါ် မှာ မှောက်လျှက် အနေအထားဖြင့် လီး ကို အားရပါးရ စုပ်ပေးနေတယ် ။ ဘဲကြီးကလဲ ဆော် ဖင်ကြီး ကို ကုန်းပီး လက်နဲ့လှမ်းလှမ်း ပွတ်ချေနေတယ် ။ ဆော်ကလည်း ဂါဝန် တိုလေး ၀တ်ထားပီး အောက်ခံပင်တီလေး က ကြိုးတစ်ချောင်း ပင်တီအနီရောင်လေး ။ တချက် တချက် ဘဲကြီးက ဆော်ဖင်ကို ပွတ်နေရင်းနဲ့ တင်ပါးကို ``ဖျန်း ´´ ကနဲ မြည်အောင် ရိုက်လိုက်တာ တင်ပါးကြီးက တုံအိအိ နှင့် အသည်းယားစရာကောင်းသည်။
``မေသီ ငါ့ကိုစုပ်ပေးပါလား ´´
ဇာတ်ကား ကို လှမ်းကြည့်နေတဲ့မေသီ ကျွန်နော့်လီးတံ ကိုလာကိုင်တယ် ။ ကျွန်နော့် ကို ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ ပုဆိုး ခါးပုံစ ကို ဆွဲချွတ်လိုက်ကာ လီးဒစ် ကြီး ကို ဖြဲကြည့်နေတယ် ။ လီးဒစ်ကို ဖြဲလိုက် ပြန်စိ လိုက်လုပ်နေတော့ လီးဒစ် ထိပ်ဝ မှာ အရည်ကြည်လေး စို့လာတယ်
ထွက်လာတဲ့ လရေကြည်လေး ကို လက်မ လေး နဲ့ အသာတို့ပီး လီးထိပ် ကို လိုက်ပွတ်ပေးနေတယ် ။ အပြင်မှာ မိုးက ခုချိန်ထိ မစဲသေး သဲသဲမဲမဲ ရွာလို့ ကောင်းနေတုန်း။
သက်ပြင်းရှည် တစ်ခု ချရင်း ကျွန်နော် ပေါင်ပေါ်က ဆင်းကာ ပေါင်ဂွကြားမှာ ဒူးထောက်ပီး လာထိုင်တယ် ။ ကျွန်နော် ဆက်တီ ကို ကျောလှမ်းမှီလိုက်ရင်း ပေါင်ကို ကားကာ လီးတံကိုလက်ဖြင့် ကိုင်ကာ ဂွင်းတစ်ချက်နှစ်ချက် ထုလိုက်တယ် ။ မေသီ့ ခေါင်းကို လှမ်းကိုင်ကာ ကျွန်နော့် လီးတံ ရှေ့ကို ဆွဲ ခေါ်လိုက်တော့ နုတ်ခမ်းလေး က အလိုက်တသင့် အသာဟ လာတယ်။ ကျွန်တော့ ပေါင် နှစ်ဘက်ပေါ် တင်ထားတဲ့ လက်တွေက ကျွန်နော့် လီးကို လာကိုင်ပီ။ ထို့ နောက် နုတ်ခမ်းလွှာထဲ ကို လီးဒစ် ကို ဖြေးဖြေး ချင်း တိုးဝင်ခွင့် ပြုလိုက်တယ် ။ နွေးထွေး စိုစွတ် တဲ့ အထိ အတွေ့ ကို ကျွန်နော့် လီးတံထိပ်ဖျား မှာ ခံစားလိုက်ရတယ် ။ ကျွန်နော် တချိန်က ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးတယ် မိန်းမတစ်ယောက် အခုတော့ သူငယ်ချင်း ရဲ့ မိန်းမ ဖြစ်သူက ကျွန်နော့်လီးကိုစုပ်ပေးနေတယ် ဆိုတဲ့ အသိက ရမ္မတ် စိတ်တွေ ပိုမိုထကြွလာစေတယ် ။ မေသီ့ ခေါင်းကို အသာလှမ်းကိုင်က လီး အ၀င်အထွက် ဖြစ်စေရန် ရှေ့ တိုးနောက်ဆုတ်လိုက်ပေးလိုက်တော့ အလိုက်သင့်ပဲ ကျွန်တော့်လီး ကို စုပ်နေတော့တယ်
``အားးးကောင်းလိုက်တာ မေသီရယ် နင်လီးစုပ်ဖူးလား နင့်ယောကျားနဲ့လေ´´
လီးတံကို စုပ်နေရင်းပဲ ခေါင်းသာငြိမ့်ပြတယ် ။ ဒါဆို အတွေ့ အကြုံရှိပီးသားပဲ ။ အင်းလေ ကျွန်တော့ မိန်းမလည်း ကျွန်နော့်လီးကို စုပ်ပေးတာပဲလေ သူလည်း သူ့ယောကျားလီး ကို စုပ်ပေးမှာပေါ့ မထူးဆန်းပါ ။
``အားးး ကောင်းလိုက်တာ မေသီ စုပ်ပေး လျှာနဲ့ ကစားပေး အားးး´´
``ပြွတ် ပြွတ် ပြတ် ´´
``အားးး အားးး အားးး´´
လီးတစ်ဝက်လောက်ပဲ ပါးစပ်ထဲကို ရောက်တယ် တ၀က်လောက် ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်နဲ့ လုပ်ပေးနေတယ် ။ ကျွန်နော် ပြောလိုက်တော့မှ လီး ထိပ်ကို လျာ နဲ့ ပတ်ရစ်ပီး ယက်ယက်ပေးတယ် ။ မေသီ့ ပါးစပ်ထဲ မှ စီးကျလာတဲ့ တံတွေးတွေက ကျွန်နော့် လီးတံတလျောက် စိုရွဲလာတယ် ။ ကျွန်နော် မေသီ့ နောက်စေ့ နားမှာ ဆံပင်တွေကို စုကိုင်ပီး ခေါင်းကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် နဲ့လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ စိတ်က တအားပါလာပီး မေသီ့ ခေါင်းကို အတင်းဆွဲကာ လီး တစ်ချောင်းလုံးဝင်အောင် ထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် ။
မေသီ မျက်ရည်တွေ ၀ဲသွားတယ် ပီးတော့ လီးတံကို ပါးစပ်ထဲမှ အတင်း ပြန်ဆွဲထုတ်တယ်
``အာ…မိုးဝေ အသက်ရှူတောင်ကြပ်သွားတယ် အတင်းကြီးပဲ´´
``စိတ်တအားပါသွားလို့ပါဟ နင်စုပ်ပေးတာ တအားကောင်းသွားလို့ ´´
ကျွန်နော့် ကို မျက်စောင်းတချက် ထိုးရင်းကျွန်နော့်လီးကို လက်နဲ့ ကိုင်ကာ ဂွင်းထုပေးနေတယ်။
``ဝေေ၀ ကော နင့်ကို စုပ်ပေးလား ´´
``ဒါပေါ့ သူလည်း ကျွမ်းကျင် အဆင့်ရောက်နေပီလေ´´
``နင်တို့တွေတော်တော် ဆိုး အရင်ကတော့ မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်လေးတွေ ကျနေတာပဲ ခုများနဲ့ကွာပါ့ ´´
``အခု နင်လည်း ငါ့မိန်းမ ဖြစ်သွားပီနော် ငါ့လီးကိုသေချာစုပ်ပေးရမယ်´´
``ကောင်းစုတ် …ပီးရင်နင်လည်း ပြန်ယက်ပေးရမယ် ငါ့စက်ပတ် ကို ´´
``ဒါပေါ့ ယက်ပေးမှာပေါ့ မိန်းမ ကလဲ နင်ပီးသွားအောင် ကို ယက်ပေးဦးမယ်´´
မျက်စောင်း လှမ်းထိုးရင်း ကျွန်နော့်လီး ကို ထပ်စုပ်ပေးတယ် ။ ဒီတစ်ခါ ဥတွေကိုစုပ်လိုက် လီးတံ ကို အလျားလိုက် ယက်လိုက်နဲ့ လုပ်ပေးတယ် ။ ရှေ့က တီဗီ ထဲမှာတော့ ဘဲကြီးနဲ့ဆော်ကြီး နဲ့ က တဗြုန်းဗြုန်း တွယ်နေကြပီ။
အဲ့ဒီနေ့က ဧည့်ခန်းထဲမှာ ပဲ ညနေ ငါးနာရီလောက်ထိ ကျွန်နော် နဲ့မေသီ သုံးချီလောက်လိုးဖြစ်တယ် ။ မေသီ့ ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပီးလိုးလိုက် ပက်လက်ချလိုက် မတ်တပ်ရပ်ကာဆော်လိုက်နဲ့ ပုံစံမျိုးစုံ ခံစားကြတယ် ။ မေသီ့ စောက်ဖုတ်ကို ယက်တဲ့ အချိန် ဆို မေသီတအားအော်တယ် တွန့်လူးနေအောင်ပဲ ။ မင်းညီ ၂ နှစ်လောက် လိုးထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ဆိုတော့ အရမ်းမကြပ်ပဲ အဖတ်တွေတော့လန်နေတယ် ။ဒါပေမယ့် စောက်မွှေးပြောင်အောင် ရိတ်ထားတဲ့ အဖုတ်ကို ယက်လိုက်ရတာ ကျွန်နော့် အတွက် ထူးကဲတဲ့ ခံစားမှုပဲ ။ အထူးသဖြင့် မွန်မ ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဘယ်လောက် ချချ သိပ်မပျက်ယွင်းပဲ တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိနေသေးတဲ့ မေသီ့ တင်ပါးတွေကို ပွတ်ကိုင် ရတာ အကောင်းဆုံးပဲဗျာ ။ ညနေ လေးနာရီလောက်မှာ နှစ်ယောက်လုံး ဖလက်ပြသွားပီး တော့ တစ်နာရီလောက် မှိန်းနေပီး ငါးနာရီကျော်ကျော်မှာ မေသီ ပြန်သွားတယ် ။ မပြန်ခင် ထပ်တွေ့ကြဘို့လည်း ပြောသွားတယ် ။ နောက်တစ်ပတ်လောက်ထိတော့ သူမလာဖြစ်ဘူး ။ ဒီကြားထဲတော့ မိန်းမ နဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားခဲ့ရတယ် ။ မင်းညီ ကို အားနာပေမယ့် သူ့မိန်းမ ကို ကျွန်နော် ထပ်လိုးချင်နေသေးတယ် ။ `တူ…တူ….တူ´´
``အေး ..သူငယ်ချင်း မင်းညီ ..ဘီယာသွားသောက်ရအောင်လို့ မင်းအားလား ´´
``အားတာပေါ့ ဒိုးကြမယ်လေ ပါဝါလိုက်မှာပဲ ဆုံကြတာပေါ့ ၇နာရီလောက် စောင့်မယ်´´
ကျွန်နော် နဲ့ မင်းညီ ပါဝါလိုက် စင်တင် ဆိုင်မှာ ၇ နာရီလောက်ကတည်းက စသောက်လိုက်ကြတာ ကိုးနာရီလောက်မှာ တော်တော် ကောင်းလာတယ် ။ ပါဝါလိုက်က ဆော်လေးတွေ ကလည်း လန်း အဆိုကလည်း မိုက်ဗျာ ။။ ကီးဘုတ်တွေ ဂစ်တာတွေ တီးတဲ့ ဘိုးတော်ကြီးကလည်း အဆိုရော အတီးရော ကောင်းသဗျ … ကျွန်နော် နဲ့ မင်းညီ ကျောင်းတုန်းက အကြောင်းတွေ ပြော ဟိုပြောဒီပြော နဲ့ နောက်ဆုံး ဖာအတူတူ သွားချ ခဲ့တာတွေပြောရင်း မာန်တွေ က ထလာတယ် ။ နှစ်ယောက်သား တိုက်ဂါးဘီယာ တစ်ယောက်ကို လေးလုံးလောက်ကုန်နေပီ
``သူငယ်ချင်းးးမင်းညီ မင်းကို ငါ ပြောစရာ ၀န်ခံစရာရှိတယ်ကွာ ´´
``မင်း စိတ်ဆိုးလို့ ထိုးရင်လဲ ငါခံမယ်ကွာ ငါမပြောပဲလဲ မနေနိုင်တော့ဘူး ´´
``မင်းကလဲ ဘာစကားမို့လို့လဲ ပလ္လင်ခံနေရအောင် အကြောင်းမသိတဲ့ကောင်တွေ ကျနေတာပဲ ´´
``အင်း ..ဒီလိုကွာ ငါပြောမယ် မင်းနဲ့ မေသီ မရခင်က ငါလည်း မေသီ့ ကို ကြိတ်ကြွေခဲ့ဖူးတယ် ´´
``ဟဟ …ငါသိသားပဲ မင်း ငါကကြိုက်တယ် ဆိုလို့ မေသီ့ ကို မင်းလက်လျော့လိုက်တာမို့လား ဒီအတွက် ငါကတောင် မင်းကို ကျေးဇူးတင်နေသေးတာပဲ´´
``မဟုတ်ဘူးကွ ငါအခု ပြောမှာ က ငါ အခုထိ မေသီ ကို ကြွေနေသေးတယ် ဟီးးးဟီးး´´
``ငါလိုးမသား…မင်းက ငါ့မိန်းမ ကို အခုထိ..သူတောင်စားလေး´´
``ငါမနေနိုင်လွန်းလို့ မင်းကို ပြောရတာပါကွာ မင်းငါ့ကို စိတ်ဆိုးလဲ ဆိုးကွာ ´´
``ဟားးဟားး မဆိုးပါဘူးကွာ ..မင်းဘာသာကြွေတာပဲ မင်းမိန်းမ ဝေေ၀ လည်း လန်းတာပါပဲဟ မင်းကလဲ တတုံးတခဲကြီး စားမကုန်သောက်မကုန်ကြီးကို´´
``ဘာလဲ မင်းလဲ ငါ့မိန်းမ ကို ကြိတ်ကြွေနေတာလား ´´
``ကြွေတော့ မကြွေ ပါဘူး ကွာ မင်းမိန်းမ က စိန်ပွဲစား ကျောက်ပွဲစားဆိုတဲ့ အတိုင်း ၀တ်တာစားတာကြီး က လန်ပျံထွက်နေတော့ ငါလည်း တခါတလေ မင်းအလစ်မှာ ခိုးခိုးကြည့်တာပေါ့ ဟားးဟားးး´´
``ဟဟ..ဟေ့ရောင် မင်း ငါ့မိန်းမ ကို သဘောကျလား´´`
``လခွမ်းပဲ ဘာမှ အားနာမနေနဲ့ မင်းပြော မင်းငါ့မိန်းမ နဲ့ လုပ်ချင်လား ´´
`` ဟိုက်ရှားဘားးး မင်းက သဘောတူလို့လား ငါက ကြမ်းတယ်နော် မင်းလို သိပ်နုနေတဲ့ ကောင် မဟုတ်ဘူး ´´
`` ရတယ် ကိစ္စ မရှိဘူး မင်းကောငါကော နုတ်လုံဘို့တော့လိုတယ်နော် နောက်ပီး မင်းဘက်ကလဲ ငါအတွက် …ဟဲဟဲ ´´
``ဘာလဲ မင်းက မိန်းမ ချင်း လဲ ဆော်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား ´´
``ဟေးးရောင် တိုးတိုး ပြောပါဟ ဘေးဝိုင်းက ကြားသွားမယ် ..ဟုတ်တယ် မင်းမိန်းမ နဲ့ ငါ့မိန်းမ လဲ ဆော်ကြမယ်လေ ဘယ်လိုလဲ မင်းသဘောတူလား ..´´
``ဟရောင် သူတို့ က သဘောတူပါ့မလားဟ ..´´
``တူအောင်ကြိုးစားပေါ့ကွာ မင်းကလဲ သင်ပေးရမှာလား လီးထဲမှပဲ မင်းမိန်းမ တောင် ဟင်းးး´´
``အေး ရှင်းရှင်းပဲ ပြောမယ်ကွာ မင်းမိန်းမ အရင်တပတ်က ငါ့အိမ်ကိုလာလည်တာ မင်းပဲခူးသွားတဲ့နေ့က ငါ့မိန်းမ မရှိတာ နဲ့ မင်းမိန်းမ နဲ့ငါနဲ့ အိမ်မှာ နှစ်ယောက်တည်း ဟဲဟဲ``
``ဟာာ မအေလိုး မင်းက ငါ့မိန်းမ ကို ဆော်လိုက်ပီဆိုတဲ့သဘောလား တွေ့မယ် ဟေးရောင် မင်းမိန်းမ ငါ့အိမ်လွှတ်လိုက် အခုမှတော့ မထူးတော့ဘူး ´´
``အေးပီးရော မနက်ဖြန် မင်း ငါ့အိမ်ကိုလာခဲ့ ငါရှောင်ထွက်ပေးမယ် ´´
``အေလိုးလေး… ငါ့မိန်းမ ကို အရင်လိုးပီး မှ သူ့မိန်းမ လာပေးတယ် တွေ့မယ် မနက်ဖြန်မင်းမိန်းမ ကို ရေဆေးခိုင်းထား ဒီည မင်း သူ့ကို မလိုးထားနဲ့ ´´
ဒီလို နဲ့ ကျွန်နော် နဲ့ မင်းညီ သဘော တူညီမှုရသွားတယ် ပီးတော့ မေသီ နဲ့ ကျွန်နော် နဲ့ ဖြစ်ပုံတွေ အသေးစိတ်ပြောပြလိုက်တယ်
``အင်း ငါ့မိန်းမ မေသီကလည်း ရိုးမလိုလို နဲ့ ဒါမျိုးကျ ငါ့ထက်တောင် သာသွားတယ် ´´
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်နော်နဲ့မင်းညီ ည ၁၁ လောက်ထိ သောက်စားကြပီး လမ်းခွဲပီး အိမ်ပြန်လာကြတယ် ။ အင်းး ကျွန်နော့် မိန်းမ တော့ မနက်ဖြန် ဟိုကောင် အဆွဲ ခံရတော့မယ် ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မိန်းမ က အိပ်နေပီ ကျွန်နော် လည်း ၀င်အိပ်လိုက်တာ မနက်ခင်း ၉ နာရီလောက် မင်းညီ ဆီ က ဖုန်း လာမှ နိုးတော့တယ် ။
``မိန်းမ ဘယ်သွားဘို့ရှိသေးလဲ ငါ အပြင်သွားဦးမယ် ညနေ နောက်ကျမယ်´´
``မရှိဘူး သွား .. ည တအား မူးအောင် သောက်မလာနဲ့ဦး ကားလည်း ဖြေးဖြေး မောင်း ´´
ဝေေ၀ နုတ်ခမ်း ကို ကစ်ဆင် ပေးလိုက်ပီး တင်ပါးလေး ကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ် အဖုတ်လေး ကို အသာ ကိုင်လိုက်ပီး
``လိင်လိင်မာမာ နေခဲ့နော် တာ့တာ´´
ကျွန်နော် လစ်ထွက်လာခဲ့တယ် ။ ကျွန်နော့် ရဲ့ ခြေဦးက မင်းညီ ရဲ့ အိမ်ကို လမ်းရောက်တော့ မေသီ့ ဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်တယ် လာခဲ့မယ်လို့ မင်းညီ ရှိလား ဆိုတော့ မရှိဘူးတဲ့ လာခဲ့တဲ့မျှော်နေမယ်တဲ့ဗျာ ………
……..မင်းညီ တော့ရိုး နှစ်လုံး သောက်ပီး မိုးဝေ ရဲ့ အိမ်ကို ထွက်လာခဲ့တယ် ။ ညက သဘောတူညီမှုကို အကောင်အထည်ဖော်မည် ။ စိတ်ထဲ သွေးတကြွကြွ ဖြစ်နေတာ ကားမောင်းရတာတောင် မဖြောင့် ။ မိုးဝေ အိမ်ရောက်တော့ တံခါးခေါက်လိုက်တော့ သူ့မိန်းမ ဝေေ၀ ထွက်လာတယ် ။
``အော် ..ကိုမင်းညီ လာလေ ကိုမင်းညီသူငယ်ချင်းကတော့ အပြင်သွားဦးမယ် ဆိုပီး ထွက်သွားတယ် ခုနလေးတင်ပဲ´´
``ဟုတ်လား ..ရတယ် မဝေ ကျွန်နော် မဝေ ပစ္စည်းလေး တွေ နဲနဲ ကြည့်ချင်လို့လာခဲ့တာ ´´
``အော် …ဟို စိန်ထည်လေးတွေပါ ကျွန်နော့် အသိတစ်ယောက်က ကြည့်ခိုင်းလိုက်လို့ပါ ´´
``အော် ဟုတ် ကိုမင်းညီ ရပါတယ် ကျမ ပစ္စည်းလေးတွေ ယူလိုက်ဦးမယ် ထိုင်ဦးနော် အေးဆေးပေါ့ ´´
လှုပ်စိ လှုပ်စိ ဖြင့် မဝေ တစ်ယောက် အခန်းထဲ ၀င်သွားတယ် ။ မင်းညီ ဆက်တီပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း
``အင်းးးးးးးးး ဟိုကောင် ငါ့မိန်းမကို လိုးခဲ့တာ ဒီနေရာပေါ့ တွေ့မယ် မဝေ´´
စိတ်ထဲ စဉ်းစားနေတုန်း မဝေ ရောက်လာတယ် ။ သူ့ ရဲ့ စိန်ထည်တွေ တစ်ခု ချင်း ရှင်းပြတယ် မင်းညီ သေချာ နားမလည် မဝေ နို့တွေကိုပဲ လိုက်ကြည့်နေမိတယ် ။သေချာတယ် မဝေ ဘော်လီ ၀တ်မထား ဂါဝန် လည်ဟိုက်လိုက်တိုင်း ရင်သား အစွန်း ကို လှမ်းမြင်မြင်နေရတယ် ။ ဒါကို မဝေ လည်း သိနေတယ် မသိသလို နေနေတယ်။ အိမ်နေရင်းတောင် မျက်နှာက ခြယ်သ ထားလိုက်တာ ပွဲ စား လို့ မပြောရဘူး ။ရေမွှေး နံကလည်း မွှေးနေတာပဲ ။ သူ့ စိန်ထည်တွေ အကြောင်း ကို နားညည်းအောင် ပြောပြတော့တယ် ။
`` ကျွန်နော့် မိတ်ဆွေ ကို ပြန်ပြောလိုက်မယ်နော် မဝေပစ္စည်းတွေ ကောင်းကြောင်းပေါ့´´
``ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုမင်းညီ မဝေ လျော့ပေးပါမယ်လို့ မဝေ ပစ္စည်း က အမှန်တွေချည်းပါ မယုံရင်လည်း သေချာ စစ် နိုင်တယ်လို့ ´´
`` မဝေ ပစ္စည်းတွေ ကို ကျွန်နော် လည်း သဘောကျပါတယ် နောက်မှ မေသီ့ ကို ၀ယ်ပေးရဦးမယ် ´´
``ဟုတ်ကဲ့ ကိုမင်းညီ မေသီ အတွက်ဆိုလျော့ပေးမယ်လေ မဝေ ပစ္စည်း တွေက အသန့်တွေချည်းပါ ´´
``အင်းးး မဝေ က လူလည်း သန့်နေတော့ ပစ္စည်းသန့်မှာပါ မိုးဝေ ရဲ့ တစ်လက်ကိုင်ဆိုတော့ သန့်မယ်မှန်းသိပါတယ် ´´
မဝေ နို့သီး ကြီးတွေကို ကြည့်ရင်း မင်းညီ အရဲ စွန့် ကာ ပြောထည့်လိုက်တယ် ။ ဇာတ်လမ်း မြန်မြန်စ မှ ဖြစ်မယ် လေ
``အယ် … ကိုမင်းညီကလည်း လုပ်တော့မယ် ဝေ က အကောင်းမှတ်လို့ အရမ်းနောက်တာပဲ ´´
``တကယ်ပြောတာပါ မိုးဝေ ကြီး အရမ်းကံကောင်းတာပဲ မဝေလို ချောချော လှလှ မိန်းမနဲ့ ရလို့ ´´
``အံမယ် ကိုမင်းညီ လည်း ကံကောင်းတာပါပဲ မေသီ က ဒီလောက်ချောတာကို ``
``ကျွန်နော် က မဝေလို ခေတ်ဆန်ဆန်လေး တွေ ပိုသဘောကျတာ မေသီ က ၀တ်စားလိုက်ရင် ဒီပုံချည်းပဲ သိပ်မလန်းဘူး မဝေလို စကပ် တိုိတိုလေးတွေ ၀တ်ပါလား ပြောတာ မရဘူး ´´
``မေသီ ကလည်း မြန်မာ ဆန်ဆန် နဲ့ ချစ်စရာလေး ပါ ကိုမင်းညီ ရဲ့ ´´
``ကျွန်နော် က မဝေလို ဆက်ဆီကျကျ လေး တွေ ကို သဘောကျတယ် အခုကြည့်လေ မဝေ ကို ကြည့်ရတာ ဆက်ဆီ ဆန်ဆန် လေး ဆိုတော့ ကျွန်နော် ခနခန ကြည့်မိနေတယ် စွဲဆောင်မှု ရှိတယ်လေ´´
``ကိုမင်းညီက လဲ မြှောက်နေပြန်ပီ ကဲပါ နေ့လည်စာ စားသွား ဝေ ချက်ထားတယ် ကျွေးပါ့မယ် ´´
``နေ့လည်စာပဲလား အချိုပွဲလေး ကော မပါဘူးလား ဟဲဟဲ ´´
``အချိုပွဲ ဆိုလဲ အချိုပွဲပေါ့ မြှောက်ပင့်နေတာ ဝေ က အခု ဆက်ဆီ ဆန်ဆန် လည်း မ၀တ်ထားပါဘူးနော် အကြည့်တွေ ထိန်းပါဦး ´´
ကိုယ်ကို မတ်ကာ ဆက်တီမှာ ကျောမှီလိုက်ရင်း ခြေထောက်ကို တင်ပလင် ချိတ်လိုက်ပီး မင်းညီ ကို ရီဝေတဲ့ မျက်လုံးတွေ နဲ့ လှမ်းကြည့်တယ် ။
``မဝေ အရင်က အပြင်မှာ တွေ့လိုက်ရင် စကပ် အတိုနဲ့ အကျီလက်ပြတ်လေး တွေ နဲ့ လေ အရမ်းမိုက်တယ် တကယ်ပြောတာ ´´
``ပီးတော့ ကျွန်နော့် မိန်းမ နဲ့ ကွာတယ် ဆက်ဆီ ဖြစ်တယ် မေသီ က ၀တ်လိုက်ရင် မြန်မာဆန်ဆန် ချည်းပဲ အောက်ခံတွေဝတ်ရင်လည်း ကျောပြည့်တွေ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီတောင် အပြည့်ကြီးတွေ ၀တ်တယ် ကျွန်တော် က အတွင်းခံ ဘစ်ကနီလေး တွေ ၀တ်ပြပါ ဆိုတာ မရဘူးဗျာ ´´
မင်းညီက ပြောလည်းပြော ပုဆိုးပေါ်ကနေ လီးနေရာ ကို ကိုင်ပြလိုက်တယ် ။
`` ကိုမင်းညီ ခန ထိုင်ဦးနော် မိုး ရေချိုးချင်လာလို့ အိုက်စပ်စပ် ဖြစ်လာတယ် ´´
``အင်းးးး သွားလေ မဝေ ကျွန်နော် ကို အားမနာနဲ့ ´´
မင်းညီ ဘေးမှ လှုပ်လီ လှုပ်လဲ့ ဖြင့် အတွင်းခန်းထဲကို ၀င်သွားတယ် ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အခန်းထဲ လိုက်ဝင်သွားရင် ကောင်းမလား မင်းညီ စဉ်းစားနေမိတယ် ။ မထူးပါဘူး ခန ထိုင်စောင့် ကြည့်လိုက်ဦးမယ် မဝေ ဘာကြောင့်ရေသွားချိုးသလဲ ရေချိုးနေတဲ့ အလှ ကို လည်း မြင်တော့ မြင်ချင်သား ဒါပေမယ့် သူသဘော မတူရင် လည်း မဖြစ်ပြန်ဘူး မိုးဝေ က သဘောတူခဲ့ပေမယ် သူရဲ့ စိတ်ကလည်း အဓိကကျသေးတယ် ။ ဆယ်ငါးမိနစ်လောက် နေတော့ မဝေ အခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာတယ် မင်းညီ အံ့သြသွားတယ် ခုနက သူပြောလိုက်တဲ့ အတိုင်း စကပ် အတို နဲ့ အပေါ်က လက်ပြတ် ဘလောက်စ် အကျီ အနီရောင်နှင့်
``ဟားးးး မိုက်တယ် မဝေ တကယ့် ဆက်ဆီပဲ ´´
``ကိုမင်းညီ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ပါ အဆင်ပြေရဲ့လား ´´
``အဆင်ပြေတာပေါ့ မဝေ က ကျွန်နော် အတွက် ၀တ်ပြတာပေါ့နော် ´´
``အင်းးး ကိုမင်းညီ ပဲ ကြည့်ချင်တယ်ဆို မေသီ့လို မြန်မာ ဆန်ဆန် ကြီး ပဲ ကြည့်နေရတယ် ဆိုလို့ သနားလို့ ၀တ်ပြတာ မကြိုက်ဘူးလား ´´
``ဟုတ် ကြိုက်တာပေါ့ ကျွန်နော် ပြောတဲ့ ဟို…အောက်ခံ တစ်ချောင်းကြိုးပင်တီလေး ကော ၀တ်ထားလား ´´
နုတ်ခမ်းလေး တွန့်က ခေါင်းညိမ့်ပြတယ်
``ဟားး ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ မဝေ ရယ် ´´
မင်းညီ မဝေ ဆီ ထသွားပီး မဝေ ခါးလေး ကို ဖက်လိုက်တယ် ။
``ကိုယ်တော့ စိတ်တွေ ထိန်းမရတော့ဘူး ဝေရယ် ´´
နုတ်ခမ်းကို အနမ်းပန်းတွေ ချွေလိုက်တယ်
``ဖြေးဖြေး ပေါ့ ကိုမင်းညီ ရယ် အချိန်တွေ ရှိပါတယ် ထွက်မပြေးပါဘူး ´´
တင်ပါးတွေ ကို ပွတ်ကိုင်ပစ်လိုက်တယ် ။
``ဝေ ကိုယ့် ကို ခွင့်ပြုပါလား ဝေ ရဲ့ အလှတရားတွေ ကို မူးယစ်ချင်တယ်ကွာ ´´
``မေသီ့ ကို ဘယ်လို လုပ်မလဲ ´´
``ကိစ္စ မရှိပါဘူး ဒီအချိန် ဆို မေသီ နဲ့ မိုးဝေ လိုးနေလောက်ပီ ´´
``ဟင်…ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ´´
``ဟုတ်တယ် မိုးဝေ နဲ့ မေသီ ဖြစ်နေကြတဲ့ အကြောင်း ညက မိုးဝေ ပြောပြလို့ သိလိုက်ရတယ် ပီးတော့ ဝေေ၀ ကိုလည်း ကိုယ် နဲ့ နေမယ်ဆို သဘောတူပါတယ်တဲ့ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကိုယ်က ဝေ့ ဆီလာပီး မိုးဝေ က မေသီဆီကိုသွားနေတာ ´´
``ဟင် ဒီကိစ္စ မေသီလည်း သိတယ်ပေါ့ ´´
``မေသီ သိမသိ တော့ မပြောတတ်ဘူး ကိုယ်လည်း သူတို့ ဖြစ်နေတာ ကို ဘာမှ မပြောလိုတော့ဘူး ပီးတော့ ကိုယ်လည်း မေသီ နဲ့ လိုးပေးချင်တယ်´´
``အော် အော် … အဲ့လို လား ဟင်းးဟင်း ကောင်းသားပဲ ဝေ လည်း တခြား ယောင်္ကျားတစ်ယောက် နဲ့ အလိုးခံချင်နေတာ အတော်ပဲပေါ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အခက်မတွေ့ တော့ဘူး အဆင်ပြေတာပေါ့ ´´
``ဒါဆို ဝေလက်ခံတယ်ပေါ့နော် ´´
``လက်ခံ ရုံတင် မဟုတ်ဘူး အန်နီးသင်း အကုန်ကြိုက်တာ ခံပေးမယ် ´´
``ကြိုက်တယ် ကိုယ်က အဲ့လို ပွင့်လင်းတာမျိုး ကြိုက်တယ် နောက်ဆို မေသီ့ ကိုလဲ အဲ့လို ပွင့်လင်းခိုင်းရမယ် ´´
ပြောရင်း မင်းညီ ဝေေ၀ ရဲ့ ဖင်ကို ကိုင်လိုက်တယ် နုတ်ခမ်းက လဲ ဝေေ၀ နုတ်ခမ်းကို ပြွတ် ကနဲ နမ်းလိုက်တယ် ပီး တော့ ဖင်ကို ကိုင်နေတဲ့ လက်က ဝေေ၀့ ဖင်ကို ဖြောင်းကနဲ တစ်ချက် ရိုက်လိုက်တယ်
ဝေေ၀ ကလည်း မခေ မင်းညီ ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ပီး အောက်က ထောင်ထွက်နေတဲ့ လီးကို အမိအရ ကိုင်လိုက်တယ် ။
``ဝေ ကိုယ်က အချစ် ကြမ်းကြမ်းလေး တွေ လုပ်ချင်တယ် ဘယ်နှယ့်လဲ ´´
`` ဘယ်လို ကြမ်းကြမ်းလေး လဲ ခံစားကြည့်မယ်လေ ´´
မင်းညီ က ဝေေ၀့ ရဲ့ အပေါ် အကျီ ကို ဆွဲ ဖြဲလိုက်တယ် ။
``ဗျိ…ဗျိ …ဗျိ …´´
အကျီကို လည်ပင်း ၀ မှ ခါး အထိ ဆွဲဖြဲလိုက်ပီး ချွတ်လိုက်တယ် ။ အောက် မှာ အနီရောင် ကြိုးပျောက် ဘော်လီ နဲ့ နို့သီးကြီးတွေ မဆံမပြဲ မင်းညီ ဝေဝေ့ ကို ဆွဲလှည့်လိုက်ပီး ဘော်လီချိတ် ကို ဆွဲဖြူတ်လိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ ဒူးထောက် ထိုင်ချ လိုက်ပီး ဝေေ၀့ တင်ပါးကြီး တွေ ကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ်
``အို…. ကိုမင်းးးးရယ် ´´
``အားးး တင်ပါးတွေက မိုက်တယ်ကွာ ….လီးဆာနေတဲ့ တင်ပါးတွေလား´´
``အားးးကိုမင်း ဘယ်လို ပြောလိုက်တာလဲကွာ စိတ်တွေ ထလာပီ ´´
စကပ်ကို အပေါ် ကို လှန်တင်လိုက်တော့ အောက်မှာ ဂျီစတင်း တစ်ချောင်းကြိုး အနီရောင်လေး တင်ပါး အကွဲကြောင်းကြားထဲမှာ ကြိုးစလေး နစ်ဝင်နေတယ်။ ဖင်ကြားထဲမှ လက်ကို နှိုက်လိုက်ရင်း နောက်လက်တစ်ဘက်က တင်ပါးကြီးကို ``ဖျန်းးးး´´ ကနဲ ရိုက်ပစ်လိုက်တယ် တင်ပါး ဖြူဖြူကြီးမှာ ရဲစပ်သွားတော့တယ်
တင်းပါးနှစ်ခြမ်း ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်နမ်းလိုက်ပီး မင်းညီမတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ် ။ ထို့နောက် ဝေေ၀့ ကို ဆံပင်မှ ဆွဲ ကာ ဆက်တီပေါ် တွန်းလှဲပစ်လိုက်တယ် ။ မင်းညီ စိတ်ထဲ မှာရှိတဲ့ အတိုင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း လုပ်ဆောင်ပစ်လိုက်တယ် ။။
``ရော့ ဝေေ၀ လီးစုပ်ပေး´´
``အင်း စုပ်မယ် အခုလို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆက်ဆံ ခံချင်နေတာ ကွာ အခုမှ ပဲ လက်တွေ့ ကြုံရပီ ´´
``ထွီ…´´ မင်းညီ လီးတံ ပေါ်ကို တံတွေး ထွေးချလိုက်ပီး လက်ကလီးတံပေါ် ကို ပွတ်ဆွဲတော့တယ်
``အားးး ကောင်းတယ် ဝေေ၀ လုပ်စမ်းးးအားးးး´´
ဝေေ၀ မှာ အပေါ်ပိုင်းဗလာ အောက်က စကပ် အပျော့သား အတိုလေးက ခါးမှာ ရစ်ပတ်နေသလို ဖြစ်ပီး အောက်ခံ ဂျီစတင်းလေးဖြင့် ဆက်တီပေါ် ထိုင်ရင်း မင်းညီ ရဲ့ လီး ကို အားရပါးရ လွေတော့တယ်
``အားးး ရှီးးးး ကောင်းလိုက်တာ ဝေေ၀ အားးးးလီးပဲကွာ ´´
လီးကို အာခေါင်ထဲထိ ထိုးသွင်းလိုက် ပါးသောင်တွေကို သွားတိုက်သလို ထိုးသွင်းလိုက်ဖြင့်လုပ်ပေးနေတယ်
မင်းညီ လီးတံပေါ်ကို သူ့တံတွေး ထွေးချလိုက်တယ် လီးတံပေါ်က တံတွေး တွေကို ပါ ရောပီး ဝေေ၀ ယက်ပစ်လိုက်တယ်
``အားးး ဝေေ၀ ပါးစပ် ဟ ခေါင်းမော့လိုက် ´´
ဝေေ၀ ခေါင်းမော့ကာ ပါးစပ် ဟလိုက်တယ်
``ပျစ်…´´ ကနဲ့ မင်းညီ တံတွေးတွေက ဝေေ၀့ ပါးစပ်ထဲ ၀င်လာတယ်
``ထပ်စုပ် ဝေေ၀ အားးးကောင်းတယ် ´´
ဝေေ၀ မင်းညီ တံတွေးတွေ က သူမ လည်ချောင်းထဲ ပါရောက်ကုန်တယ် လီးက လည်း ကြီးလိုက်တာ အမွှေးတွေက ထူပိန်းနေတယ် ။ သူယောင်္ကျား ဝေမိုးကတော့ အမြဲလိုလို လီးမွှေးတွေ ရိတ်ထားတယ် ။ သူမ က တော့ မရိတ် ။ အခု လို လီးမွှေးထူတဲ့ လီး ကြီး ကို မြင်လိုက်ရတာ သူမ အတွက် ပိုမို စိတ်ထစရာ ဖြစ်နေတယ်
``ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´
``ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´`
လီးတံကို အဆုံးထိ ငုံစုပ်လိုက် ပြန်ထုတ်ပီး ပါး နဲ့ ရိုက်လိုက် ဖြင့် ဝေေ၀ တစ်ယောက် အကြိုက်တွေ့နေတယ် မင်းညီ ကတော့ အောင်နိုင်သူ စစ်သူကြီး တစ်ယောက်အလား ခါးကြီး ထောက်လျှက် ဝေေ၀ လီးစုပ်ပေးတာကို ငုံကြည့်နေတယ် ဝေေ၀ ကလည်း လီးစုပ်နေရင်း လက်တဘက်က သူမ အဖုတ်ကို ပွတ်နေတယ် စက်ပတ်ရှေ့မှာ ဖုံးထားတဲ့ ပင်တီလေး ကို ဘေးကို အသာဆွဲဖယ်ပီး အစိကို ကျကျ နန ပွတ်ချေနေရင်းလီးစုပ်ပေးနေတယ် ။ တံတွေးတွေက ဝေေ၀့ မေးစေ့ အထိ စီးကျနေတယ် ။
``အားးးကောင်းလိုက်တာ ဝေေ၀ အားးးရှီးးးး´´
မင်းညီ ဝေဝေ့ ဆံပင်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ရင်း စောက်ဖုတ်ကို လိုးသလို ပါးစပ်ကို လိုးခွဲပစ်လိုက်တယ်
``အားးး လိုးတော့မယ်ကွာ ဝေေ၀ ဖင်ကုန်းလိုက် ´´
ဝေေ၀ က သူ့စကပ်နဲ့ပင်တီ ကို ချွတ်မယ်အလုပ်
``မချွတ်နဲ့ ဝေေ၀ ဒီ အတိုင်းလိုးမယ်´´
ဝေေ၀ ဖင်ကုန်းပေးလိုက်တယ် သုံးယောက်ထိုက် ဆိုဖာဆက်တီပေါ်မှာ လက်ကိုင် တန်းပေါ် လက်တင်လိုက်ပီး ဝေေ၀ ဖင်ကုန်းလိုက်တယ် ။ မင်းညီကလည်း ဝေေ၀ နောက်မှာ နေရာယူလိုက်ပီး စကပ်ကို ခါးမှာ သေချာ တင်လိုက်ရင်း ဂျီစတင်း ကြီး ကို ဘေးကို အသာဆွဲဖယ်လိုက်တယ် ထို့နောက် ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားထဲကို တံတွေးထွေးချလိုက်ပီး လီးဒစ်နဲ့ ဖင်အကွဲကြောင်းတလျောက် အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲလိုက်တယ်
``အားးး မောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ …အားးး´´
မင်းညီ လီးဒစ် ကို ဖင်ဝ ကို တေ့လိုက်တယ်
``ဟင်…. အဲ့ကိုမလုပ်နဲ့လေ အဖုတ်ကိုလုပ် မရဘူးနော် မခံဖူးဘူး ´´
``ဖင်ချချင်တယ် ကွာ အဖုတ်က မိုးဝေ ခနခန လိုးထားတာ မလား ဖင်အရင်ခံကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း သိသွားမယ်´´
ပြောပီး တင်ပါးကို လက်ဝါးတစ်ချက်ကျွေးလိုက်တယ် မိုးဝေ ဖင်ချ ချင်နေတာကြာပီ မေသီကို တောင်းဆိုသေးတယ် မပေးခဲ့ဖူးဘူး … အခု တော့ မိုးဝေမိန်းမ ဝေေ၀့ ဖင်ကို ချမယ်
ခါးအောက်မှ လက်ကို လျှိုသွင်းကာ အဖုတ်ကို ပွတ်လိုက်တယ် ။ အားးပါးပါးးး စောက်မွှေးတွေ ထူလာချည်လားးး မိုက်တယ် ဒါမျိုး ကြိုက်တာ မင်းညီ စိတ်ထဲ မှာ တွေးရင်း လီးဒစ်ကို ဖင်ဝ ထဲ နှစ်သွင်းလိုက်တယ်
တစ်ချက် …မ၀င် …
လီးထိပ်ကို တံတွေး တစ်ချက်ပွတ်လိုက်ရင်း ဖင်ဝ ကို နဲနဲ ဖြဲလိုက်ကာ ဒစ်ကို ထပ်သွင်းလိုက်တယ်
``အားးးး အမလေးးးးသေဘီ သေဘီ ´´
``ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်းးးး´´
တင်ပါးကို ခပ်စပ်စပ် သုံးချက် ပစ်ကျွေးလိုက်တယ် တင်ပါးမှာ နီရဲပီး လက်ချောင်းရာတွေပေါ်လာတယ် ။
``အားး မောင် နာတယ် ဖြေးဖြေး အားးး´´
``မနာအောင် ဖင်ကို သေချာ ဖြဲပေးထား ချူံ မထား နဲ့ ´´
``ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း``
မင်းညီ ရဲ့ တင်ပါးရိုက်ချက်တွေကြောင့် ဝေေ၀ တစ်ယောက် စိတ်တွေ ပိုထလာတယ် ပီးတော့လည်း ကြည့်ဦး အဖုတ်ကို မလိုးပဲ ဖင်ကို လာသွင်းတယ် ။ ဝေေ၀ ဖင်တခါဖူးမှ မခံဖူးပါ
စမ်းကြည့်ချင်စိတ်တော့ ဖြစ်မိတယ် ။ အခု လီးဒစ်က ဖင်ဝမှာ မြုပ်ဝင်နေပီ ။ဒီလို ခပ်ကြမ်းကြမ်း အလိုးခံချင်နေမှု ကလည်း စိတ်ထဲ ဖြစ်နေတာ ကြာပီ ။ ဖင်ဝမှာ နာနေတာက တင်ပါးတွေ ကို အရိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင် အာရုံပြောင်းသွားတုန်း မင်းညီ လီးတံကြီးက ဖင်ဝထဲ တိုးဝင်လာတယ်
``ဗျစ် ..ဗျစ် …ဗျစ် ``
``အားးးး မောင် နာတယ် နာတယ် ´´
``ဖြန်းးးးး ဖြန်းးးး ´´
နာတယ် အော်လိုက်တာ နဲ့ မင်းညီက ဝေေ၀့ တင်ပါးတွေကို ရိုက်တော့တာပဲ ။ တင်ပါး နှစ်ခြမ်းလုံး ပူထူနေပီ တဖြေးဖြေး နဲ့ မင်းညီ လီးတံ က ဝေေ၀့ ဖင်ဝ ထဲ အဆုံးထိ တိုးဝင်သွားပီ ။ ဖင်နုတ်ခမ်းသားများဟာလည်း လီးတံနှင့် အတူ အထဲကို ကျူံ ၀င်ပီး လိုက်ပါ သွားတယ် ။ မင်းညီ ဖင်ဝပေါ် တံတွေး ထပ်ထွေးလိုက်ပီး လီး ကို တ၀က်လောက် ပြန်ဆွဲ နုတ်တယ် ။ လီးပြန်ဆွဲ ထုတ်လိုက်ချိန် စအိုဝ မှ လေတွေအံထွက်လာတယ်
ထို့နောက် မင်းညီ လီးတံ ကို ထပ်ထိုးသွင်းပြန်တယ် လီးတံ ၀င်သွားတိုင်း ဖင်ဝ နုတ်ခမ်းသားတွေက လီးတံ နဲ့ အတူ အထဲကို တိုးဝင်လိုက်ပါသွားတယ် ။ ထုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက်ဖြင့် ဖြေးဖြေးချင်း လုပ်နေရာက လီးတံဟာ ဖင်ထဲမှာ ချောမွှေ့လာတယ် ။
``ဗျစ် ..ဗျစ် …ဗျစ်း´´
``အားးး အ အားး ရှီးးးး´´
``အားးး ဟုတ်တယ် မောင် နာတာ သက်သာလာပီ အားးး ထိုးထည့် ဖြေးဖြေးချင်း ထည့်ပေး ´´
ဝေေ၀ လက်တဘက် ဖြင့် သူမရဲ့ စက်ပတ် ကိုလှမ်းကိုင်ကာ အစိကော စောက်ဖုတ်ထဲ ပါ နှိုက်လိုက် ပွတ် ချေလိုက် လုပ်တော့တယ် ။
``အားးးမောင် ကောင်းလာပီ စောင့်သွင်းတော့ အားးး´´
``ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´
``ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်းးးးး´´
`` အားး ဟုတ်တယ် ရိုက်ကွာ ဖင်ကို ရိုက်ပီး စောင့်ထည့် ကောင်းတယ်မောင် အားး ´´
``အားးးကောင်းတယ် ငါလိုးမ ဝေေ၀ အားးးကောင်းလိုက်တာ နင့်ဖင် လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ ´´
``အားးး ဝေေ၀ အားးး ဖင်ခံလို့ ကောင်းလားး´´
```အားး ကောင်းတယ် မောင် ဝေ ဖင်ခံလို့ ကောင်းနေပီ လိုးးးဝေ့ ဖင်ကိုလိုးအားးးးးး´´
``ဖတ် ဖတ် ဖတ်´´
မင်းညီ လီး က အပြတ်တောင်နေပီ ။ မနက်က တော့ရိုး နှစ်လုံးဆင့် သောက်ထားတာ မှန်သွားတယ် ။ အခုလို ဖင်ချချင်နေတာ ကြာပီ ။ ချမယ့်ချရတော့ သူငယ်ချင်းမိန်းမ ကို ချရသည်။ မင်းညီ လီးတံ ကို အပြင်ပြန်ဆွဲ ထုတ်လိုက်ပီး ဆက်တီပေါ် ထိုင်လိုက်တယ်
``မောင် ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ မောပီလားးး´´
``အင်း နဲနဲ မောလာတယ် လာ ဝေေ၀ မောင့်လီး ကိုစုပ်ပေးဦး ဝေ့ ဖင်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ လီးကို စုပ်ပေး ´´
ဝေေ၀ ဘေးမှ ဆုတ်ဖြဲထားတဲ့ အကျီနဲ့ လီးတံကို သုတ်မယ်အလုပ်
``မသုတ်နဲ့ ဒီအတိုင်းစုပ် ဒါ ဝေ့ ဖင်ထဲ ထည့်ထားတဲ့လီး စုပ်´´
``အာာာ မောင်ကလည်း ညစ်ပတ်တာကြီးကို ´´
``မရှည်စမ်းပါနဲ့ စုပ်ဆို စုပ်စမ်းပါ ´´
မင်းညီ ဝေေ၀့ ဆံပင်ကို စောင့်ဆွဲလိုက်ပီး လီးပေါ်မျက်နှာ တင်ပေးလိုက်တယ် ဝေေ၀ မတတ်နိုင်တော့ ၀က်ဖြစ်မှတော့ ချေးမကြောက်သင့်တော့ နုတ်ခမ်းကို အသာဟ ပီး လီးတံကို ဆွဲ စုပ်လိုက်တယ် ။ ငံကျိကျိ အရသာလိုလို အနံကလည်းစူးရှလှတယ် ။ ဖင်ထဲက ထွက်လာတဲ့ လီး ဆိုတော့ နဲနဲ တော့ ရွံသလိုလို ရှိလှတယ် ပါးစပ်ထဲ မှာ ခါးတဲ့ အရသာလိုလို လည်း ရှိလှတယ် ပြောမပြတတ်သော အရသာမျိုး ( ဟီးးး အဲ့ဒီ အရသာ မခံစားဘူးတာမို့လို့ တကယ်လည်း ပြောမပြတတ်သော အရသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် သိချင်ရင် ခံစားကြည့်ကြပါနော် )
စုပ်ရင်းစုပ်ရင်း ဖြင့် လီးတံမှာ အရေတွေ ပြောင်လာပီး ဝေေ၀့ တံတွေးတွေသာ ကျန်တော့တယ် မင်းညီ လည်း ဝေေ၀့ ဆံပင်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲစောင့်ကာ ပါးစပ်ကိုလိုးနေတယ် ။ လီးတံက အာခေါင်ထဲ ထိ ရောက်အောင် အဆုံးထိ ၀င်-င် သွားတယ်
စောင့်ထိုးရင်း စောင့်ထိုးရင်း ဖြင့် မင်းညီ ပီးချင်လာတယ် ။ အချက် ၂၀ လောက်ခပ်သွက်သွက် မညှာမတာ စောင့်ထိုးရင်း လီးတံ ထိပ်မှာ ကျဉ်တက်လာပီး သုတ်ရည်တွေ ကို ဝေေ၀့ ပါးစပ်ထဲ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်
``အားးး ဝေ အားး ပီးပီ အားးး ထွက်ကုန်ပီအားးး´´
``အု အု …အူးးးးး´´
``အားး ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် ´´
ပျစ်ခဲခဲ အရည်တွေ ဝေေ၀့ နုတ်ခမ်းမှ လျှံကျလာတယ် မေးစေ့ မှတဆင့် လည်တိုင် လည်တိုင်မှတဆင့် နို့သီးတွေ အထိ စီးကျကုန်တယ်
``မျိုချလိုက် ဝေ အားရှိတယ်´´
ဝေေ၀ ပါးစပ်ကို ဟ ပြတယ် လျှာပေါ်မှာ ဖြူပျစ်ပျစ် အရည်တွေ အများကြီးပဲ ထို့နောက် ပါးစပ်ကိုပိတ်ပီး မျက်လုံးမှိတ် ကာ မျိုချလိုက်တော့တယ်မင်းညီ နဲ့ မဝေ နှစ်ယောက်သား အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဖက် ရင်း အနားယူနေတယ် ။
``ဝေ မိုးဝေနဲ့ မေသီ့ ကို ခေါ်လိုက်ပါလား ´´
``ဟင် ဘာဖြစ်လို့လဲ … ´´
`` မောင် တို့ လေးယောက် စိတ်တူကိုတယ် တူ နေကြတာပေါ့ မကောင်းဘူးလား´´
ဝေေ၀ တွေတွေ လေး စဉ်းစားနေတယ်
ခနနေတော့ မဝေ ဖုန်းကောက်ကိုင်လိုက်ပီး မိုးဝေထံ ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်
``အင်း…မိန်းမ ပြောလေ ´´
``မောင် အိမ်ပြန်လာခဲ့တော့ မေသီ့ ကိုလည်း ခေါ်ခဲ့ ´´
``အော် အင်းးးအင်းးး ဝေ အဆင်ပြေရဲ့လား´´
``ပြေမပြေ အိမ်ရောက်မှ ကြည့် ဒါပဲနော် မောင် ချစ်တယ် ´´
…….. ကျွန်တော် နဲ့ မေသီ တချီ လုပ်ပီး အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ကြတယ် ..အင်း ဒီအချိန် ဆို ကျွန်နော်မိန်းမ ဝေ လည်း အလိုးခံပီးရောပေါ့ ။မေသီ ကို လည်း ကျွန်နော် အကြောင်းစုံ ပြောပြလိုက်တယ် ။ မေသီ ကလည်း ကျွန်နော် တို့ တွေ ပြဿနာ မဖြစ်ရင် ပီးရော ပိုတောင် အဆင်ပြေသေးတယ်လို့ ပြောလာတယ် ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျွန်တော့မှာ ရှိတဲ့ သော့ အပို နဲ့ပဲ ဖွင့်ပီး နှစ်ယောက်သား ၀င်လာလိုက်တယ် ၀င်ဝင်ချင်းပဲ အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာ အ၀တ်ဗလာ ကိုယ်စီ နဲ့ ကျွန်နော့်မိန်းမရယ် ကစ်ဆင် ဆွဲနေကြတယ် ဝေေ၀ က ကျွန်နော့် ကို လှမ်းကြည့်ရင်း ပြုံးပြသလို မင်းညီက လည်း သူမိန်းမ ကို လှမ်းပြုံးပြတယ် ကျွန်တော် အိမ်တံခါး ကို သော့သေချာ ပြန်ပိတ်ပီး မေသီ့ ခါးလေး ကို ဖက်ကာ မျက်နှချင်းဆိုင် ဆက်တီမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တယ် ။
``ဟားးးဟားး အဆင်ပြေနေလိုက်တာ ကြည့်ဦး ငါတို့ ၀င်လာတာတောင် ဒီပုံစံ နဲ့ ကြိုဆိုတယ် မိုက်သကွာ ´´
``ပြေမပြေတော့မပြောနဲ့ မိုးဝေ မင်းမိန်းမ အဖုတ်တော့မလိုးရသေးဘူး´´
``အင်…ဘာလို့လဲ ဒီပုံစံ ဖြစ်နေပီး ယုံစရာလား ´´
မင်းညီက ကျွန်နော့်မိန်းမ မဝေ ရဲ့ ပေါင်ကို မပီး ပြလိုက်ပီး
``ဟာာ ဟေးကောင် မင်း ဝေ့ ကို ဖင်လိုးလိုက်တာလား ´´
မဝေ က ရီရင်း
``မောင်မှ မလိုးတာ သူများ စားသွားတာပေါ့လို့ ဟိဟိ ´´
``ငါတောင် မင်းမိန်းမ မေသီ ကို ဖင်မလိုးဘူး ´´
``ဟရောင် မင်းဘာသာ မလိုးတာ လိုးချင်လိုးပေါ့ဟ ´´
``အံမယ် ဖြစ်နေလိုက်ကြတာ ဝေေ၀ရေ ငါတို့ကို သူတို့ အရုပ်တွေ ကျ နေတာပဲ ´´
``ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ ´´
ကျွန်နော် လည်း မေသီ ဘက်လှည့်ကာ
``မေသီ အ၀တ်တွေ ချွတ်လိုက်ကွာ သူတို့ တွေချည်းဖြစ်နေတယ် ကိုယ်တို့လည်း အတူတူ စလိုက်ရအောင် ´´
မေသီ့ အ၀တ်တွေ ချွတ်မယ်လုပ်တော့ ကျွန်နော့် မိန်းမ ဝေေ၀ ထလာပီး မေသီ့ အ၀တ်တွေ ကို ကူချွတ်ပေးတယ် ပီးတော့ တင်ပါးကြီးတွေ နဲ့ ကျွန်နော့် ကို ပွတ်လိုက်သေးတယ် ကျွန်နော်လည်း ကျွန်နော့် အ၀တ်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ကျွန်နော်တို့ အ၀တ်တွေ ချွတ်နေကြတာ ကို မင်းညီက စိန်ပြေနပြေ ထိုင်ကြည့်နေတယ်။
အခု ဆို ကျွန်နော် တို့ လေးယောက်သား အ၀တ်မဲ့ကိုယ်စီ ဖြင့် ဧည့်ခန်းထဲမှာ အားလုံး ရှေ့ဆက်ရန် အသင့် ဖြစ်နေပီ
``ဝေ ကိုယ့်လီး စုပ်ပေးသွားဦးး``
``မေသီ ကို စုပ်ခိုင်းလိုက်နော် မောင် ဝေ မအားသေးဘူး ဟိဟိ ´´
ကျွန်နော့် လီးကြီး ကို ဝေက တချက်နှစ်ချက် ဆွဲစောင့်ကာ`ဖျန်းးးးး´´
မေသီ က ဝေေ၀့ ဖင်ကို တချက် လှမ်းရိုက်လိုက်တယ်
``ကောင်မ တော်တော် ရွ နေတယ်ပေါ့ ´´
ဝေေ၀ က မေသီ့ ကို လျှာလေး ထုတ်ပြပီး နုတ်ခမ်းလေး ကို အသာသပ်ပြလိုက်ရင်း မင်းညီ ထံ တလှမ်းချင်း လှမ်းထွက်သွားတယ် ကျွန်နော့်မိန်းမ ဝေေ၀့ ဖင်ကြီးကလည်း နောက်မှ ကြည့်တော့မှ စွဲမက်စရာ နိမ့်တုံမြင့်တုံဖြင့် ။ ကျွန်နော် တောင် မချဘူးသေးတဲ့ ဖင်ကို ဟိုကောင် လိုးခွဲ ပစ်လိုက်တာတောင် မနာလိုချင်သလိုလို ဖြစ်သွားတယ် ။ ရတယ် အခု မေသီ ဖင်ကလည်း ကျွန်နော့် အတွက် ဖြစ်နေပီလေ ။ မေသီက ကျွန်နော့်လီး ကို ကိုင်ပီး စုပ်ပေးနေပီ ဝေေ၀ ကလည်း မင်းညီ လီး ကို စစုပ်နေပီ ။ မိန်းမချင်း လဲ ချ ရတဲ့ အရသာ ကြောင့် ကျွန်နော် နဲ့ မင်းညီ ရဲ့ လီးကြီးတွေ ကလည်း အပြတ် မာတောင်နေတယ် မေသီက ကျွန်တော့် ရှေ့ မှာ ဖင်ကြီး ကုန်းပီး မင်းညီ ရဲ့ လီး ကို တပြွတ် ပြွတ် နဲ့ အားရပါးရ စုပ်နေတာ နောက်ကို တင်ပါးကြီးက ကားအယ် ထွက်နေပီး စအိုဝ ညိုတိုတို က ခုနကလေးတင် အလိုးခံထားရတဲ့ အတွက် ရဲစပ်စပ် ဖြစ်နေတယ် ။ ကျွန်နော့် မိန်းမ ဝေေ၀ ရဲ့ ဖင်ဝ ကိုကြည့်ရင်း အောက်က ကုန်းစုပ်နေတဲ့ မေသီ့ဖင်ဝ ကို တချက်လှမ်းနှိုက်လိုက်တယ်
``ဟေးရောင် မိုးဝေ ဘယ်လိုလဲ ငါ့မိန်းမ လီးစုပ်ပေးတာ ကောင်းရဲ့လား ´´
``အားး ကောင်းတယ်ကွာ မင်းသေချာ သင်ပေးထားတဲ့ပုံပဲ ´´
``အေး မင်းမိန်းမ က ပါးစပ် ပိုပြဲတော့ အစုပ်ခံရတာ ကောင်းလိုက်တာ မိုးဝေရာ အားး ကျွတ် ကျွတ် စုပ် စုပ် ဝေေ၀ စုပ် အားးး အာခေါင်ထဲထိ စုပ်ပစ်လိုက် ´´
``အားးးး ကောင်းတယ်စုပ် မေသီ စုပ်´´
``အ …အားးးအားးကောင်းလိုက်တာ ´´
မေသီ့ဖင်ဝ ကို နှိုက်ရင်း လီးအစုပ်ခံနေလိုက်တယ် ။
``အားးးးစုပ်စမ်း မေသီ အားးးကောင်းတယ် ´´
တင်ပါးတွေကို ရိုက်ပေးလိုက်တော့ မေသီ့စုပ်အားတွေက ပိုပိုပြင်းလာတယ်
မေသီ နဲ့ဝေေ၀ သူတို့ ယောင်္ကျားတွေ ရဲ့ရှေ့မှာပဲ တစ်ယောက်တလဲ အစုပ် ပြိုင်နေသလား အောင့်မေ့ရတယ် ။
``မေသီ လိုးချင်ပီကွာ ဖင်ကုန်းလိုက်တော့နော် ´´
``အင်းးးး ကုန်းမယ်လေ ´´
မေသီ ဖင်ကုန်းလိုက်တယ် နောက်ဘက်ကို စအိုဝ က ပြူပြုလေး ထွက်နေတယ်
``မိန်းမ ဝေေ၀ မေသီဖင်ကို တချက်ဖြဲပေးစမ်းပါ မိန်းမ ဖြဲပေးထားတဲ့ ဖင်ကို တက်လိုးချင်လို့´´
ဝေေ၀ က လီးစုပ်နေရာမှ ထလာပီး မေသီဖင်ကို ဖြဲပေးလိုက်ယုံသာမက ဖင်ဝ ကို တံတွေးလေး စွတ်ပေးလိုက်ပီး လက်ချောင်လေး နဲ့ အသာပွတ်ပေးလိုက်သေးတယ် ပီးတော့
``မောင် လိုးတော့ ´´ လို့ ကျွန်နော့် ကို မျက်စ လေး ပစ်ပီး လှမ်းပြောတယ် ကျွန်နော် လည်း မေသီ့ ဖင်ဝ ကို လီးဒစ် အသာတေ့လိုက်ပီး တစ်ထစ်ချင်း ထိုးထိုးသွင်းလိုက်တယ်
``အ …အားးအ ´´
``အားးးး နာတယ် ဖြေးဖြေး အားးး´´
ကျွန်နော့်လီး မေသီဖင်ထဲ ၀င်နေချိန် ဝေေ၀ ကမေသီ့ တင်ပါး ကို ခပ်စပ်စပ် တချက် ရိုက်လိုက်တယ် နောက်ပီး ဝေေ၀ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျွန်နော် တို့ နားလေး မှာ ဖင်လေး ကုန်းထားတုန်း နောက်က မင်းညီကလည်း ဝေေ၀့ စောက်ဖုတ် ကို လီးစသွင်း ပီး အပိုင်ကျူံးတော့တယ်
``အားးး အ အားးး´´
``ဘတ် ဘတ် ဘတ် ´´
``အင့် အင့် ရော့ အားးး´´
ကျွန်နော် နဲ့ မင်းညီ နှစ်ယောက်သား ဝေေ၀ နဲ့မေသီ့ ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပဲ ဖင်ကုန်းခိုင်းထား ပီး အပိုင် ဆော်ကြတော့တယ် အသံတွေ ကလည်း အခန်းထဲ ဆူညံထွက်နေတယ် မေသီနဲ့ဝေေ၀ ကလည်း တအင်းအင်း တအားအား ဖြင့် အလိုးခံနေကြတယ် ကြမ်းပြင်ပေါ်လိုးရင်း ကျွန်တော်တို့ ဒူးတွေ နာမှန်းမသိ နာလာတာကြောင့် မေသီ နဲ့ ဝေေ၀့ ကို ဆိုဖာ နှစ်ယောက်ထိုင်ပေါ်မှာ တန်းစီပီး ကုန်းခိုင်းလိုက်ရင်း ကျွန်နော် နဲ့ မင်းညီက အောက်ကနေ မတ်တပ် ရပ်ကာ ထပ်ဆော်တယ် ။ ကျွန်နော်ကတော့ မေသီ့ ဖင်ကို ပဲ လိုးနေပီးတော့ မင်းညီကတော့ ကျွန်နော့် မိန်းမ ဝေေ၀့ စောက်ဖုတ်ကို ချနေတော့တယ် ။ မေသီနဲ့ ဝေေ၀့ ရဲ့ မတိမ်းမယိမ်း ဖင်တုန်း ကြီးတွေ တခါခါ ဖြင့် အလိုးခံကြတယ် ။ ကျွန်နော် တို့ နှစ်ယောက်လည်း သူ့မိန်းမ ကိုယ်ချ ကိုယ့်မိန်းမ သူ ချ ဖြင့် အရသာ ကို တွေ့နေတော့တာပဲဗျာ မေသီဖင်ကလည်း လိုးရင်းလိုးရင်း ဖြင့် ကျယ်လာ ချောလာပီး လိုးလို့ ကောင်းလာသလို မေသီ လည်း ခံလို့ ကောင်းလာပုံရလာတယ် . တအင်းအင်း ဖြင့် ညီးညူနေယုံမက သူ ဖင်ကြီး နဲ့ ပါ ပြန်ပြန် စောင့်ပေးလာတယ် ။
နာရီ ၀က်နီးပါးလောက် အားရပါး ရစောင့်ပီး လိုးပီး ချိန်မှာတော့ ကျွန်နော့်လီးထိပ် က ကျဉ်တက်လာပီး ပီး ချင်လာတယ် ကျွန်နော် လည်း မေသီ့ ဖင်ပေါက်ထဲမှ လီး ကို စွဲနုတ်ကာ စက်ပတ် ထဲ စောင့်လိုးရင်း မေသီ့ စောက်ဖုတ် အတွင်းသို့ လီးရေတွေ ပန်းထုတ် ပစ်လိုက်တော့တယ်
``အားးး အားးး ထွက် ထွက် ကုန်ပီ အားးးး´´
``အားးးကောင်းလိုက်တာ မောင် အားးး ထုတ်လိုက် အားးး´´
စောက်ပတ် အတွင်းထဲ သို့ လီးတံ ကို အဆုံးထိ ထိုးထည့်ကာ ကပ်ထားရင်း ကျွန်နော့် လရေတွေ ကို အကုန်ပန်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ ဘေးမှ မင်းညီ နဲ့ ကျွန်နော့် မိန်းမ တို့ အတွဲ လည်း တအင်းအင်း တအားအား အော်သံတွေ ဆူညံနေပီး ကျွန်နော့် မိန်းမ ကလည်း ဖင်ဘူးတောင်းကြီး ကို ထောင်နေတာ မင်းညီက ဝေေ၀့ ဖင်ကြီး တွေကို ကိုင်ကာ နောက်ကနေ အားကုန် ကျူံးနေရင်း ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ နှစ်ယောက်လုံး အော်သံတွေ ဆူညံပွတ်ပီး စောက်ပတ်ထဲ လရေတွေ ပန်းထုတ်ကာ ပီးသွားကုန်ကြတယ် ။ ဝေေ၀ ကော မေသီ ကော ဆိုဖာ ဆက်တီ ပေါ် မှာ ခွေခွေလေး တွေ လဲကျရင်း မှိန်းကုန်ကြတယ် ။ ကျွန်နော်နဲ့ မင်းညီ လည်း ရေခဲသေတ္တာ ထဲမှ ဘီယာဘူးများ ထုတ်သောက်ကာ ဝေေ၀ နဲ့ မေသီ ကိုကြည့်ရင်း သူ့မိန်းမ ကိုယ့်မိန်းမ ဖင် ဘယ်လောက် လိုးလို့ ကောင်းကြောင်း စမြုံပြန်ပြောနေလိုက်သေးတယ် ။ အဲ့နေ့က တနေကုန် ကျွန်နော့် အိမ်မှာပဲ စားလိုက်သောက်လိုက်ကြ နဲ့ ည မိုးချုပ်တော့ ထပ်ဆွဲလိုက်ကြနဲ့ လိုးပွဲ ကြီး ကျင်းပရင်း မနက် လင်းခါနီးလောက်မှ အားလုံး အိပ်ပျော်ကုန်ကြတယ် ။ဒီနောက်ပိုင်းတော့ ကျွန်နော့် လင်မယား နှစ်စုံတွဲ ဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိလာသလို တခါတလေ ၂ စုံတွဲ တူတူ ဆွဲ ၊ တခါတလေ ဝေေ၀ နဲ့ မေသီကို ကျွန်နော် တစ်ယောက်ထဲ တူးဝမ်းဆွဲ ၊ တခါတလေ ကျွန်နော် မရှိတုန်း မင်းညီ က တူးဝမ်း ဆွဲကြနဲ့ ပျော်စရာ မိသားစု ၂စု အဖြစ် ရပ်တည်လာခဲ့ကြတာ နောက်သုံးလေး လလောက်မှာ ဝေေ၀ ကော မေသီ ကော ပြိုင်တူ ဆိုသလိုပဲ ကိုယ်ဝန်ရလာကြတယ် ။ သူတို့တွေ ကိုယ်ဝန် ရလာတော့ ကျွန်နော် နဲ့ မင်းညီ လည်း အလုပ်တွေ ကြိုးစားရတော့တာပေါ့ ။ ကိုယ်ဝန် ရလာ ကြတာ က သိပ် အဆန်းတကြယ် ကိစ္စ မဟုတ်ပေမယ် ဆန်းကျယ်တဲ့ ဖြစ်ရပ် တစ်ခုကတော့ ကျွန်နော့် မိန်းမ ဝေေ၀ က သမီးလေး မွေးပီးတော့ မင်းညီ မျက်နှာပေါက်နှင့် တထေရာတည်း ဖြစ်နေပီး မေသီ့ သားလေး ကတော့ ကျွန်နော် နဲ့ တထေရာတည်းပဲဗျာ …ကျွန်နော် နဲ့ မေသီ နဲ့ သားလေး ကို မင်းညီ နဲ့ မေသီ က ကျွေးမွေး စောက်ရှောက် ခဲ့ကြသလို ဝေေ၀ နဲ့ မင်းညီ ရဲ့ သမီးလေး ကို လည်း ကျွန်နော် နဲ့ ဝေေ၀ ပြုစု စောင့်ရှောက် ခဲ့ကြတယ် ။
``မေသီ သေချာ စုပ်ပေးလိုက်နော် ငါလည်း ကိုမင်းညီ ကို သေချာ ပြုစုလိုက်မယ် ´´
Posted by bluegyi at 02:17
Anissa Wijayanti6August 2018 at 19:14